Igbo - 01. Conversation - Booklet 8: Kwesịrị Onye Alakụba ọ bụla Onye Bụrụ Onye Kraịst Nwụrụ? | Grace and Truth
Home -- Igbo -- 01. Conversation -- 8 Persecution of Converts
8.01 -- Kwesịrị Onye Alakụba ọ bụla Onye Bụrụ Onye Kraịst Nwụrụ?
Pọl onyeozi kwupụtara ndị niile gbanweere site n'okpukpe ndị Juu na ndị Alakụba na Kraịst: Maka gị, anyị na-eche ọnwụ ogologo ụbọchị nile; a na-agụ anyị dịka atụrụ ga-egbu (Abụ Ọma 44:22), mana, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye hụrụ anyị n'anya (Ndị Rom 8:36-37).
Onyeozi nke mba nile kwupụtara nkwuputa a site na ọnwụ ya mgbe akpọpụrụ ya isi n’afọ 63 A.D., dị ka Jemes, nwanne Jizọs, onye e gburu otu afọ tupu mgbe ahụ. E kwukwara na akpọgidere Pita n'obe na Rom na 64 AD Onyenwe anyị bilitere na-enye ụfọdụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya ohere isonye na nhụjuanya ya (Ndị Rom 5:3-5; Ndị Filipaị 1:20-23; 2:16) -17; Ndị Kọlọsi 1:24; 2 Timọti 2:10-13; 1 Pita 4:16.19).
Ọnwụ, dị ka Pọl dere, bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ, dị ka imeri imeri juputara echiche niile na ndụ nke ndị ezi omume. Ndị ntụgharị site na Islam kwesịrị ịhapụ ọdịnala mbụ ha na mmụọ nke okpukperechi ha, ka ha na-eto n'okwukwe rue mgbe ha jikọtara ọnụ na Jizọs Kraịst na ụka ya.
Onye ọ bụla na-agwa ndị Alakụba okwu banyere Jizọs Kraịst na nzọpụta ya nwere ike ịchọpụta na enwere ụzọ mgbochi atọ siri ike ịgabiga site na onye ndụmọdụ mmụọ ọ bụla chọrọ ime ihe banyere nsogbu ndị Alakụba.
• Kraist, nwa Chineke di ndu
Nke mbu, onye Alakụba jụrụ echiche Chukwu nke Jizọs Kraịst. Site n'àgwà a, ọ wezuga onwe ya ịmata na ịmara Chineke dịka Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ. Ọ jụrụ ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu ma kewapụ onwe ya na mgbapụta zuru ezu. O gọnariri n’onye ezi omume site n’amara ma ọ chọghị ịnụ ọtụtụ ihe gbasara ịlọ ụwa. Ya mere, onye akaebe Kraist gharịrị ịrịọ Jizọs ka o nye aka ma nyere ya aka iji mee ka onye Alakụba kwenye na nwa Meri bụ Ọkpara Chineke onye zọpụtara anyị site na mmehie anyị.
Onye nwere Ọkpara nwere ndụ; onye na-enweghị Ọkpara Chineke enweghị ndụ. (1 Jọn 5:12)
Ọ baghị uru ma ọ bụ ihe enyemaka ịmalite mkparịta ụka ya na onye Alakụba site na ịsị ozugbo na Kraịst bụ Ọkpara Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị Alakụba na-aghọta okwu a dị ka nna sitere na Allah site na Meri, ma na-eme ihe na-adịghị mma banyere ya.
• Obe nke Kraist
Ihe mgbochi nke abuo nye onye Alakụba ịghọta Kraịst na mgbapụta ya bụ ngọnarị nke obe ya (Sura al-Nisa '4:157). Onye Alakụba anaghị ịghọta ihe ọnwụ Jizọs nwụrụ n'ọnọdụ anyị, ma ọ bụ nke ịchụ aja ya na ọcha ya na mmehie niile. O nweghi onye Alakụba ga-achọ mgbaghara nke mmehie ya oge niile ọ jụrụ Kraịst nke akpọgidere n’osisi! Onye ọ bụla na-agwa ndị Alakụba okwu banyere okike na ikpe, banyere Abraham na Moses, banyere ọrụ ebube nke Kraịst na nrịgoro ya na Chineke emetụbeghị isi nsogbu ahụ. Anyị kwesịrị inyere onye Alakụba aka ịghọta na ọ bụ onye mmehie. Mgbe ahụ anyị nwere ike ịkọwaara ya na Kraist ewepụwo mmehie anyị (Jọn 1:29-31).
• izi ezi nke Akwụkwọ Nsọ
Ihe mgbochi nke atọ na - eme ka onye Alakụba ghara ikwere na Chineke, bụ Nna ya, bụ enyo ya enyo na enwetaghị Akwụkwọ Nsọ. Site na otiti a n'okpuru mmuo nke Islam achipuwo ntụkwasị obi nke otutu ndi Alakụba na Torah na ozioma. Ha kwenyere na ihe ọ bụla ndị Juu na Ndị Kraịst kwuru bụ akụkọ ifo, akụkọ ifo na njehie. Onye obula nke choro inyere onye Alakụba aka ịghọta nzọpụta nke emezurula ya n’ime Kraịst, kwesiri imepụta na ya tụkwasị obi na Akwụkwọ Nsọ bụ eziokwu nke Chukwu na mkpughe a na-agbanwe agbanwe.
Ihe mgbochi atọ a abụghị nsogbu nke ọgụgụ isi nke enwere ike ikpochapụ site na ezi uche dị na ya na arụmụka dabara adaba na ụdị Alakụba. N’ebea ka anyi huru uzo imegide ndi Kristian n’agha na ike mkpochapu nke nwere ike itisa site n’amara n’ike nke Mmuo Nso. Ekpere - jiri okwukwe na a ga-anụ ekpere ndị a - dị oke mkpa na mgbasa ozi n’etiti ndị Alakụba dịka akaebe n’ịdị umeala na eziokwu, nke mmụọ nsọ na-eduzi. Hụnanya nke Jizọs Kraịst, ka bụ asụsụ nke ruru n'ụlọ mkpọrọ kachasị njọ.
• Imeri echiche ndi Islam banyere Chineke
Mgbe onye n’aha Jizọs richara ihe mgbochi atọ ndị a nke jụrụ ịbụ Alakụba, ọ ga-abụrịrị na nsogbu nke Islam. Ebumnuche nke Allah na-ekpebi ọdịbendị Alakụba n'akụkụ niile, na okwukwe, ndụ, iwu na omume. O nweghi ike ịkwụsị egwu nke onwu ha, ma obu ima jijiji na ubochi ikpe nke n’abia. Ugbo niile nke Islam lekwasịrị anya na Allah. Onye Alakụba bụ obere ma ọ bụ obere obere ihe oyiyi nke Allah ya. Onye o bula choro inyere ya aka ka o gh oo ndi Islam agha ghaghi ịkọwa Nna nke Jizos Kraist dika azịza nke mmụọ nke Ozi Ọma maka nghọta nke Allah.
• Onye bu Allah?
Onye Alakụba na-ekwupụta gbara akaebe nke okwukwe: Ọ nweghị Chukwu ma ọ bụghị Allah. Allah bụ naanị otu, ọ bụghị atọ! Ọ dị oke ukwuu, na-enweghị atụ, na naanị onye dị ike. Echiche niile nke Chukwu banyere ya ezughi oke ma zighi ezi. Aha ya na akparamagwa ya jikọtara ọnụ ma kpochapụ ibe ya oge ụfọdụ. Onweghi ọgụgụ isi nke mmadụ nke puru ịghọta ihe pụrụ iche. O burula ụzọ ihe nile ma choo irube mmadu nile. Allah abụghị chi nke ịhụnanya na-enweghị atụ. Ọ na-eduhie onye ọ chọrọ, ọ na-eduzi onye ọ bụla Ọ chọrọ (Suras al-An'am 6:39; al-Ra'd 13:27; Ibrahim 14:4; al-Nahl 16:93; al-Fatir 35:8; al-Muddathir 74:31). Ọ bụghị chi nke eziokwu, n'ihi na ọ kpọrọ onwe ya onye kachasị aghụghọ (Suras Al 'Imran 3:54; al-Anfal 8:30; al-Nisa' 4:142). Ya bu onye mpako (Sura al-Hashr 59:23). Ebere ebere ya bụ naanị ndị Alakụba na-atụ egwu Chineke na-enye ego ha ma na-alụ ọgụ maka mgbasa nke Alakụba (Suras al-Baqara 2:195; Al 'Imran 3:76,134,148,159; al-Ma'ida 5:13,43,93; al-Tawba 9:4,7,108; al-Mumtahana 60.8 et al.). Mụọ nke Alakụba kpọrọ Nna, Ọkpara na Mọ Nsọ asị ma kọwaa Atọ n’Ime Otu (Sura al-Ikhlas 112:1-4, et al.).
• Nna anyi nke bi n’elu igwe
Azịza nke ozi ọma banyere nghọta banyere Alakụba nke Allah bụ Nna nke Jizọs Kraịst. Chineke nke puru ime ihe nile bu Nna anyi (!) Onye kegidere onwe anyi rue mgbe ebighi ebi, ndi mmehie ndi ejiri aja kpuo, site na ogbugba ndu nke Ọkpara Ya bu Jisos Kraist Onye jiri mmanu Mụọ anyi tee anyi. Ozi oma anyi ezughi anyi ihe di anya, nke anyi na achoghi iru, ma o dighi nghota, kama o gosiri anyi Nna di nso na nke anyi. Ọ na-eche banyere onye ọ bụla n'otu n'otu ma mara anyị karịa ka anyị onwe anyị maara. Ọ gụpụtala ntutu isi anyị (Matiu 10:30; Luk 12:7). O jiri Ọkpara ọ mụrụ nanị ya chụọ aja maka anyị iji zọpụta anyị n'ikpe ikpe ikpe. Site na Mo Nso Ya choro ibi n’ime anyi. Chineke bụ Nna anyị, onye chiri anyị n’iwu ma nyekwa anyị mmụọ. Mụọ Nsọ na-eduzi anyị iji nye aha Nna anyị otuto.
Ọdịiche dị n’etiti Islam na Kristian dị ka nnukwu ihe n’etiti Allah na Nna nke Jizọs Kraịst. Nchigharị nke onye Alakụba ga-eduga na nso nso a ma ọ bụ na-enweghị nkewa, wee jujụọ nke ndị obi na-enweghị obi ebere, ruo mgbe Chineke ga-azọpụta onye ahụ site na ịdaba n'ogwe aka nke Nna anyị nke bi n’eluigwe.
• Mgbanwe ahụ
Ntughari di otua abughi na o doro anya na uche mmadu, kama na mgbanwe ndi mmadu gha eme. Ekwesịrị ịgbanwegharị ndụ niile ka ọ bụrụ onyinyo nke Nna. Na ịghọ onye Kraịst, ọ gaghị ekwe omume onye Alakụba ịnọgide na ọdịnala Alakụba ya na mmụọ nke ndị na-emegide Kraịst ruo ogologo oge. Niile ubi nke ịdị adị ya ga-eduzi gakwuru Nna. N'ekpere, ọ na-amụta ịgwa Nna ya okwu, onye ga-aza ya na Bible. Mgbe onye Alakụba ghọrọ nwa nke Chukwu, ọ ga-ewepụrịrị Muhammad ma yikwasị Kraịst! Ọ ga-anata ihe ùgwù nke itolite na ọdịbendị nke Jizọs Kraịst ma sonye na ezinụlọ nke Nna anyị nke bi n’eluigwe. Nka putara iju ndu mbu ya na nkwuputa nke Mo Nso. Themalite nzọụkwụ mbụ na mmalite pụtara ịbanye n'ụwa nke mmụọ nke Islam amabeghị. Mụọ nke Nna anyị chọrọ ịbanye n’ime akụkụ niile nke ndụ ya. N’adịghị nsọ, ọ dịghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị! N’enwezighi mmeghari ohuru onweghi onye n’adabere na Kraist. Mgbanwe ahụ bụ amara nke Nna anyị, ma ọ bụrụhaala na anyị na-ege Ọkpara ya ntị ma na-ekele Ya maka ịkpọ anyị.
• Ọnyà ọdịnala na okpukperechi
Ọ bụrụ na mmadụ anaghị ekewapụ onwe ya n’ebe Allah nọ, kama ọ nwara n’otu oge ịrapara n’onwe ya na Chineke Nna, okwukwe ọhụrụ ahụ ga-anọ n’isi ya, ma ọ baghị n’obi ya. Ọtụtụ nchigharị na-akwụsị ọkara. Otu onye ntụgharị kwuru, “amatala m ma kwere na Allah bụ nna m nke bi n’eluigwe, onye nyere m ndụ ebighi ebi.” Nwoke ahụ nwara ime ka Alakụba na Iso cizọ Kraịst mekọọ mmekọrịta. Ọ bụ Onye Kraịst bụ Onye Kraịst, ma na ịhụ nwunye ya na ụmụ ha na ndị ikwu ha, ọ tụgharịrị Muslim n'etiti ndị Alakụba. Nsonaazụ bụ ụdị schizophrenia nke mmụọ. Ọdịiche doro anya n’etiti ìhè na ọchịchịrị, n’etiti ọnwụ na ndụ, dị oke mkpa. Njikọ site n'okwukwe na Jizọs Kraịst na-amanye onye Alakụba ịgbakụta Allah azụ, na ịnọrọ na Nna. Mana imirikiti ndị Alakụba na-egbu oge iwepụ azụ ahụ ozugbo; Ha na-eme ya ọtụtụ mgbe, ka ha na-eto n'okwukwe. Mana enweghi inweta ụlọ n’enweghị ịtụgharị.
• Gini bu amara putara?
Na kor'an, okwu a bu "amara" pụtara ugboro 38. Ndị Alakụba kwenyere na ha na-ebi n'okpuru amara na-adịgide adịgide nke Allah. Mana na Islam, amara putara ihe di iche na akwukwo nso. Ebere Allah dịrị ndị Alakụba ahụ siri ike, ihe na-agara nke ọma, ahụike ma nwee nsọpụrụ. Onye nwere otutu umuaka, umu anumanu, ugbo ala, ndi inyinya kamgbere na ego aburula onye Allah nwere inata amara. Allah duuru Muhammad gakwuru Zainab, nwunye nwa nwoke Zaid mụụrụ, ebe ọ ka lụrụ ya (Sura al-Ahzab 33:37) Egosipụta mmepe a bụ amara nke Allah!
N’ozi ọma, amara, pụtara, mgbaghara, mmehie niile! Jesus na-enye anyị ezi omume n’ezie, n’ihi na ọ tara ahụhụ ma nwụọ n’ọnọdụ anyị. Ọtụtụ mgbe, ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha, ndị ọrịa, ndị agadi na ndị nwute na-ejide amara nke Chineke ngwa ngwa karịa ndị ọgaranya, ndị siri ike na ndị mara mma, ndị na-efu efu na mmụọ. “Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye na mmụọ!” (Matiu 5:3). Na mgbakwunye na igosiputa amara na ndi kwere ekwe natara onyinye amara, nke bu nkpuru nke Mo Nso: ihunanya, obi uto, udo, ndidi, obi oma, ikwesi ntukwasi obi, obi oma na njide onwe onye (Ndi Galetia 5:22-23). Onye chigharịrị ga-amata na akụ na ụba, akụ nke ụwa, nsọpụrụ nke ụwa, “ịbụ onye ziri ezi” na ịnwe ike na-emegidekarị onyinye onyinye ime mmụọ nke anyị natara n’aka Nna anyị nke bi n’eluigwe.
• Mmehie ka ọ bụ onye mmehie?
N’alakụba, e nwere katalọgụ ogologo nke mmehie ndị gbara ọkpụrụkpụ: obere mmehie, omume anabataghị, mmejọ ndị a na-achọghị, ezigbo mmehie, mmejọ megide iwu (Shari’a), mpụ, omume ọjọọ, nnukwu mmehie na mmehie na-enweghị mgbaghara. Kor'an kuziri na onye Alakụba nwere ike were ọrụ ọma kpochapụ nke ọ bụla nke mmehie ya, belụsọ ndị nke ikpeazụ (Suras al-Tawba 9:111; al-'Ankabut 29:7). Ọ dịghị ahụ onwe ya dịka onye mmehie! Okwu ahụ ga-emebi ma mee ka ezinụlọ ya dum kpasuo iwe! Ọ ga-abụ ihe ihere ịsị na onye Alakụba bụ onye mmehie!
Ezigbo Ndị Kraịst maara na ha bụ ndị mmehie na furu efu mgbe ha jiri onwe ha tụnyere ịdị mma na ịdị nsọ nke Nna ha nke eluigwe. ‘’Onweghi onye di nma ma o bu Chineke ”(Matiu 10:18). Anyị jupụtara na mmejọ, mmejọ, furu efu na ikpe na ụdị mmadụ anyị. Idụhe owo ndomokiet emi ọfọnde ke idemesie. Zuru okè nke Nna anyị na-egosi na ikpe amaghị anyị (Matiu 5:48). Mmehie na njehie anyị sitere na ire rere ure na-enweghị njedebe. Naanị amara nke Jizọs Kraịst bụ olileanya anyị. Ọbara ya na-asachapụ anyị mmehie anyị niile, Mụọ Ya na-ewulitekwa ihe okike ọhụrụ n’ime anyị. Ọ bụrụ na onye Alakụba amabeghị ire ure ya n'ìhè nke Chineke, ọ maghị na ọ bụ nke enweghị olileanya, kama ọ na-eche na ọ nweghị onye nzọpụta ma ọ bụ ịchụ àjà n'ọnọdụ ya!
• Akara aka ma ọ bụ ntuli aka?
Kor'an kuziri ndi Alakụba na Allah bụ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, Onye maara ihe niile na Onye amamihe. Nsonaazụ nkà mmụta okpukpe site na agwa ndị a bụ na ọ ga-eburịrị ụzọ kee onye ọ bụla na ihe niile ụzọ (Suras al-Furqan 25:2; al-Qamar 54:49; al-Talaq 65:3). Nwatakịrị n’afọ nne ya ka ekpebisiri ike site n’ụbọchị nke 40 nke ịdị adị ya (Sura al-Najm 53:32). Mmehie niile, onyinye, ihe omume na ndụ ya ka edobere tupu oge eruo. Kor'an na-ekwusi ike na Allah buola ụzọ kee ndị Alakụba niile maka pọgatrị (Sura Maryam 19:71,72)! Mgbe nke ahụ gasịkwara, Allah ga-azọpụtakwa ụfọdụ ndị na-atụ egwu ya, ma ọ bụ chụọ nnukwu ego ọgụ ma lụọ ọgụ n'Agha Nsọ. Ogbenye nke di uku na ala ndi Alakụba, na agha aghara aghara site na mgbere.
N’akwụkwọ ozi nke Ndị Efesọs (isi 1:3-4) Ndị Kraịst nwere ike ịgụ na Nna anyị nke eluigwe ahọpụtara anyị n’ime Jizọs Kraịst ka anyị bie ndụ dị nsọ n’ihu Ya, n’ịhụnanya ya, ka e wee kwekọọ n’oyiyi nke Onye ọ hụrụ n’anya. Nwa (Ndi Rom 8:29-30). Ntuli aka a anaghị ekpuchi anyị dị ka ụzarị ọkụ na-egbu egbu, mana ọ na-eme ka anyị rụọ ọrụ nke mere na anyị hụrụ n'anya, too ma jiri ịnụ ọkụ n'obi na izi ezi na-ejere ya ozi. Ọ bụ Nna anyị bụ onye buru anyị ụzọ kọọ na Jizọs Kraịst, ọ bụghịkwa mmụọ aka ike nke njigide jupụtara! A na - ahụ ihe omume ya bụ isi na Jenesis 1:27 yana mgbasawanye nke mmụọ ya na Matiu 5:48 na Jọn 14:9-11.
• Eziokwu ka ọ bụ ụgha?
N’alakụba, e nyela gị ikike ịgha ụgha n’okpuru ọnọdụ anọ: n’Agha Nsọ (mgbe gị na ndị na-abụghị ndị Alakụba na-agwa ha okwu), mgbe ndị Alakụba abụọ kwesịrị imekọrịta onwe ha, di na nwunye ya, na nwunye n’ebe di ya nọ. A pụrụ imebi iyi dị ukwuu (Sura al-Tahrim 66:2). Chineke n’onwe ya na-eduhie ndị na-eduhie ya (Sura al-Nisa ’4:142). Ọ bụghị ihe ijuanya na na ụwa Alakụba azụmahịa na ndụ esiteghi na ntụkwasị obi, eziokwu na iguzosi ike n'ihe.
Jizọs kwuru, sị: "Ka Ee gị bụrụ Ee" bụrụkwa "Ee e, 'Ee e'; ihe obula gabigara ihe a gabigara nmebi ahu” (Matiu 5:37). Jizọs n'onwe ya bụ eziokwu (Jọn 14:6). Mụọ Nsọ bụ eziokwu (Jọn 14:17; 16:13). Nna anyị nke bi n’elu-igwe bụ eziokwu (Jọn 4:24). Okwu ya bu eziokwu (Jọn 17:17). Onye tọghatara ga - dị ka anyị - mụta ịbụ eziokwu! Lovehụnanya n’enweghị eziokwu ga-abụ ụgha, dị ka eziokwu na-enweghị ịhụnanya ga-abụ igbu mmadụ n'ụzọ ime mmụọ. Anyi aghaghi imuta iji obi ekwu eziokwu, na ijiko oru ihunanya na eziokwu nke ozioma.
• Lylụ karịa otu nwanyị ma ọ bụ ịlụ otu nwanyị?
Kor'an nyere ndi Alakụba ohere ịlụ otu, abụọ, atọ ma ọ bụ anọ, ma ọ bụrụhaala na nwoke nwere ike ilekọta ha otu (Sura al-Nisa '4:3). (A kagbuola iwu a na Turkey, Morrocco na Tunisia). N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị Alakụba enweghị ike ịlụ karịa otu nwunye ma ọ bụ abụọ n'ihi na ha anaghị akpata ego zuru oke. Agbanyeghị, alụghị di na nwunye dị ka Islam nke njikọta. Di nwere ike d nwunye ya aka na nti, mgbe o buru isi ike, o nwere ike tiri ya ihe (Sura al-Nisa '4:34). Di nwoke guzoro elu kari nwunye ya, dika, n’ulo ikpe, akaebe nke umunwanyi abuo otu aka ya ka otu ndi Alakụba (Sura al-Baqara 2:282). N'aka nke ozo, enyere ya ikike ibuta iko ya n’aka ndi oru ohu ya mgbe obula o choro. Kor'an na - enye mmadu ohere ichi eze ya dika onye isi ala. Unitydị n'otu nke di na nwunye idozi nsogbu nke ndụ ọnụ abụghị isiokwu Islam. Ndi Islam putara iduu na onye ozo.
Kraist gosiputara na ịlụ nwunye karịa ka eburula ụzọ kee (Mak 10:6-9). Pọl onyeozi kwupụtara na nwanyị ga-edo onwe ya n'okpuru di ya, mana di kwesịrị ịchụ onwe ya n'àjà maka nwunye ya, dịka Kraist chụrụ onwe ya maka nzukọ Ya (Ndị Efesọs 5:21:33). Okwu banyere alụm di na nwunye nke Kraist abughi onye na-achi, kama ọ bụ onye hụrụ ibe ya n'anya ma na-ejere ya ozi. Dika odi iche di iche na Allah na Nna nke Jisos Kraist si di, otua ihe di iche di na nghota di na nwunye na ezi ndu n’ime okpukperechi abuo a.
• Ndị nkuzi n’ụlọ akwụkwọ
N'oge gara aga - na oge ụfọdụ ọbụna taa - onye nkuzi nke Qur'an manyere ụmụ akwụkwọ dị iche iche na amaokwu. Ha kwesịrị iji obi ha mụta ha. Onye nkuzi nọ n’elu ụmụ akwụkwọ ya dịka obere Allah n’ocheeze ya. Ọ gbaghị ume na nghọta onye ọ bụla, kama na-amụkwu ihe site na obi na igụ. Ọgbọ nke ndị nkuzi nke Qurdu akpụzila ọdịnala islam dịka ụzọ echere n'echiche na ndị Alakụba.
Na gburugburu ebe ndi Kristian, ezigbo onye nkuzi bụ ezigbo nna ma bụrụkwa onye na-anwa iduru ụmụ akwụkwọ ya na nghọta nke ha, iche echiche, nyocha ya na nchịkọta ya. Omume ya nwere ike ime ka umuaka karie nkuzi ya. Ọ dịghị anọkwasị n’ocheeze n’elu ha, kama ọ guzo n’etiti ha. Kraist kwuru banyere onwe ya: “Nwa nke madu abughi ka e jere ozi, kama ka O jere ozi, nye kwa ndu Ya ka O buru ihe mgbapụta bayere otutu” (Matiu 20:28). Echiche nke ije ozi kwesịrị ntụkwasị obi na-abanye na ndụ niile nke Ndị Kraịst, karịa n'ọchịchọ nke ọchịchị. Nke a chọrọ ntụgharị zuru oke, ọ bụghị naanị na ndụ ndị tụgharịrị si Islam, kama na mmadụ ọ bụla, n'ihi na ọchịchọ ịdị mma nganga abatawo onye ọ bụla.
• Ọrụ siri ike na nlekọta mmekọrịta
Na Europe, ndị mmadụ na-amụmụ ọnụ ọchị ma na-ekwu na onye maara ihe ọrụ pụtara ma ghara ịhapụ ya, ga-abụrịrị onye anyaụfụ! Na Eshia ọtụtụ mmadụ na-ebi ndụ dịka iwu a siri dị. Na mba ndị Alakụba, a na-emeso onye ọrụ ihe dịka ohu. N'ime ime obodo, nke mmekọrịta ọha na eze emetụbeghị, a na-asọpụrụ ndị isi ala nke ugbo dị ka obere chi. Ndị tụkwasịrị obi na-esusu ha aka na ụkwụ. Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ na-anata ụgwọ ọnwa ha abụọ ma ọ bụ atọ na-abịaghị n'oge ka ha ghara ịgba ọsọ. N'otu oge, mgbe ndị ọrụ nke otu ụlọ ọrụ n'otu obodo malitere ọrụ, onye nwe ya resịrị ụlọ ọrụ ya ma chụọ ndị ọrụ ya niile.
N'ime ndị agha Sudan, ndị oge ụfọdụ gbara obodo nta dị na ndịda ọgụ, gbaa ndị ikom ma were ndị inyom na ụmụaka. Iwu nke ịgba ohu na kor'an na Shari'a ka akagbubeghị. Ndị Alakụba ghọtara onwe ha dị ka otu ndị nwenụ. Ekwesịrị igbu ma ọ bụ mee ohu. Ndị Juu na ndị Kraịst nwere ike ịdị ka ndị “ụmụ amaala nke abụọ 'echebebere ma hapụ ha ka ha jeere ndị isi Alakụba ha ozi (Sura al-Tawba 9:28-29).
Kraist, n’agbanyeghi na anyi bi n’ozi dika ohu. Ọ dị obi umeala ma dịkwa nwayọ. Ọ rụrụ ọrụ dịka ọkwa ọkwa, ọ bụghịkwa dịka onye na-azụ ahịa. Jizọs kpọrọ ndị ọkụ azụ nwere nchegharị ka ha soro ya, bụ ndị na-arụsi ọrụ ike. Kraist edoghi ndi isi, kama ndi odibo. Chineke anyị dị nyị, nwekwa ịhụnanya. Onye n’eso ya ga-adi n’onyinyo ya. Onye were ya n’ọrụ ga na-elekọta ndị ọrụ ya agaghị erigbu ha. Ọchịchị nwere ike itolite ebe Kristibere ụzọ maka ya.
• Ndi ochichi onye kwuo uche ya bu ihe ndi Islam?
Na Lebanon, mgbe ụfọdụ ndị nne na nna na-agwa ụmụ ha aha ndị ọzọ: Napoleon, de Gaulle, Bismarck, Stalin na Nasser. Enwere ike ịchọta ndị a na listi aha ụlọ akwụkwọ na asambodo. Otu mgbe onye nkuzi kpọrọ nkuzi n'okporo ụzọ kpọọ onye nkuzi ọzọ sị: “Hitler akwụbeghị ụgwọ ụlọ akwụkwọ ya!” Mgbe a jụrụ ya, o gosiri na aha nna nwanyị nwanyị bụ n'ezie Hitler. Otutu ndi n’Ebe Anyanwu na-eche nwoke siri ike nke jiri mkpụcha igwe kpochapu ihe ojoo. Gamal Abd al-Nasser, Khomeini na Saddam Hussein bụ ndị aka ike a na-akwanyere ùgwù, ndị mmadụ sochiri ya. Enwere ike ịgụ Saddam bụ eze nke ụwa! N'elu mgbidi ụlọ elu islam dị na Secunderabad, India! Ndị Alakụba na-eche ndị ọchịchị aka ike, obere obere Allah, ọ bụghị maka ndị ọchịchị onye kwuo uche ya nke enwere ike ịme ntuli aka ma ọ bụ. Ha dị njikere ịlụ ọgụ maka arụsị ha, dị ka Hisbollah na Hamas ji ndụ ha chụọ maka Allah.
Ma Jizọs sịrị: Alaeze m abụghị nke ụwa a. Abụ m eze. Ọ bụ n'ihi nke a ka amụrụ m, ọ bụ n'ihi nke a ka m jiri bịa n'ụwa, ịgbara eziokwu ahụ àmà. Onye obula nke bu eziokwu n’ekpem nti (Jọn 18:36-37). Onye Alakụba aghaghị ịmụ ịghọta ihe Jizọs gwara Pita: Mighachi mma agha gị n'ọnọdụ ya, n'ihi na ndị niile na-eji mma agha ga-eji mma agha (Mat. 26:52).
Onye na-abịakwute Jizọs ga-agbanwe: Ndị mpako ga-adị obi umeala, ndị umengwụ dị uchu, ndị nwere obi ọjọọ, na onye ọchịchị n'ọchịchị nwere ike ịghọ ohu mmadụ niile. Okwukwe n’ime Jizọs na-eme ka anyị bụrụ ụdị Nna anyị nke bi n’eluigwe. Mgbe anyị na-ekpe ekpere: “Ka edoro aha gị nsọ,” arịrịọ a kwesịrị ịkpali mgbanwe ime mmụọ n'ime obi anyị, na ụka anyị na ndị na - agbanwegharị. Mgbanwe ime mmụọ dị oke mkpa nye onye ọ bụla chọrọ ịghọ Onye Kraịst tozuru okè. Enwere ike mezuo ya naanị n'ike na ịhụnanya nke Nna anyị (Ndị Rom 5:5) site n'aka Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị Jizọs Kraịst.
Ndị nọ na Middle East na ọtụtụ ndị Alakụba n'ozuzu ya anaghị arụ ọrụ n'otu n'otu. Ejikọtara ha na ezinụlọ ha na ọbara, mkpụrụ obi na omenala. Ha bi na “ezi” ha na ndị ikwu ha n'otu ụkpụrụ, otu okpukpe, na oke ọrụ maka ibe ha. Otutu ndi luru nwunye ma obu ndi ahuru maka akwukwo di elu, ma obu ndi nwere ikike di iche na gọọmenti site na mkpebi nke agburu. Enweghị ezinaụlọ ya ma ọ bụ ebo ya, onye ọbụla nọ na Ọwụwa Anyanwụ abụghị ihe ọ bụla ma nwee mmetụta na-efunahụ ya.
N'obodo ukwu mmadụ na-ebi nanị ya, ọ na-anọrọ onwe ya nwayọ nwayọ site n'agbụ nke ezinụlọ ya. Yabụ na ndị Eshia taa na-apụ site na "anyị" gaa na "M". Ndị Alakụba na-aghọ ndị mmadụ n'otu n'otu. Mana mmekorita ha na obodo ha ka siri ike karie igba obodo ha.
Mmadu mmadu no na Orient adababeghi n'ogo nke ndi mmadu. Ọ naghị ele onwe ya anya dị ka ọnụ ọgụgụ. Ọ gbadatabeghị n'enweghị aha dị ka ọtụtụ ndị na America na mba ndị mepere emepe nke Europe. Ọ ka bụ onye otu ezinụlọ ya.
Ọtụtụ ndị na-ezisa ozi ọma kwesịrị ịdị nwayọ na-akpọ ndị Alakụba n'otu n'otu ka ha kpebie Kraịst, n'ihi na ha abụghị “M”, kama ha na-ebi ndụ dị ka akụkụ nke “anyị”. Ọbụghị naanị na ha nwere obi nke ha ime mkpebi, kama ndị ọzọ n’ebo ha nwere ihe ha kwuru.
• Ezinaụlọ - nnukwu ihe mgbochi n’agbanwe kraist!
Ihe agbụ ọdịnala n'etiti ezinụlọ bụ ihe mgbochi kachasị sie ike maka onye Alakụba ịghọ Onye Kraịst! Ubon inyịmeke enye asan̄a ke udịm. Ọ dịghị uzuzu ga-adakwasị nsọpụrụ nke ezinụlọ, ọ ga-akarị onye ọ bụla n'ime ha ga-aghọ onye nnupụisi, onye ekweghị ekwe ma ọ bụ onye chigharịrị. Ọ bụrụ na onye Alakụba aghọọ onye komunizim ma ọ bụ onye ekweghị na Chineke nwere ike ịnagide ma were ya dị ka ihe pụrụ iche gbasara mmụọ ya na mmepe ya. Ma ahụhụ ga-adịrị onye otu agbụrụ nke ghọrọ Onye Kraịst! Otu ndi Alakụba na-ekwusi ike na nwoke ịlụ nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị na-egosi na nne ya bụ nwanyị na-akwa iko! Site n'ụzọ niile ndị otu ahụ chọrọ ịmanye onye ọ bụla nọ na nrube isi nrube isi n'ihe metụtara okpukpe na otu.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ izi ndị Alakụba ozi ọma, ọ kwesịrị ileta ezinụlọ nke onye na-achọ ihe ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ikewapụkwa ya na ya. Ndị nne na nna na ndị ikwu kwesịrị ịhụ na ndị enyi ọhụrụ ahụ bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ndị na-eme ihe n'eziokwu. Ọ dị mkpa izere ịtụkwasị obi ebe ọ bụ na ndi otu, ndị otu, ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị oji na-achọkwa ịdọrọ ndị mmadụ n'otu n'otu.
Guru na kor'an na onye Alakụba ekwesịghị ịbụ enyi nke Ndị Kraịst ma ọ bụ ndị Juu n'ihi na ndị ahụ agaghị ahapụrụ ya n'udo ruo mgbe ọ ga-adị ka ha (Sura al-Ma'ida 5:52.57 et al). Mana n'otu oge ahụ, ị gụọ na kor'an na Ndị Kraịst bụ ndị kachasị mma nke ndị Alakụba n'ihi na ha na-enwere ha ọmịiko ma ghara ịdị mpako (Sura al-Ma'ida 5:82).
Ahụmahụ na-egosi na n'ọtụtụ oge, otu agbụrụ niile ekwenyeghị ka ezisa ha ozi ọma. Agbanyeghị, anyị kwesịrị ịgbalị, ọ bụrụgodị na naanị na ise na pasent iri nke ikpe mmadụ dum ga-emeri n'aka Jizọs mgbe ị na-agakwuru otu. Ọ na - eme ya mgbe ụfọdụ!
• Ihe mgbu na-ewute ezinụlọ
Mgbe nne na nna ma ọ bụ onye lụrụ nwanyị hụrụ na otu n'ime ezinụlọ ha na-agụ Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ nke Ndị Kraịst, ha anaghị atụgharị uche a ozugbo mana ha na-anabata ya ma na-anabata ya mgbe ụfọdụ. Na afọ sayensị na mgbasa ozi onye ọ bụla kwesịrị ịgwa onye ọ bụla ihe niile - mana ekwenyeghị, kwenye na ya! A nabata omuma nke akwukwo nso, ma ha na-ekwusi ike na mmetuta obi omimi obula na ntinye nke ime mmuo nke Kraist bu ihe ojoo.
Ozugbo ọ pụtara ìhè na onye na-eto eto ma ọ bụ okenye na-achọ ezigbo mmasị na Kraịst na Oziọma Ya, a na-agwakarị nwanne nna ya ka ọ gwa onye ahụ okwu, ịkpọghachi ya ka ya na ndị ezinụlọ si dọọ ya aka na ntị, dọọ ya aka ná ntị ma ọ bụ ọbụna yiri ya egwu ma ọ bụrụ na o kweghị nkwa n'ezie ịhapụ nkwenye ahụike nke Ndị Kraịst.
Ọ bụrụ na ịdọ aka na ntị dị otú a nke ezinụlọ enweghị mmetụta ọ bụla, etinyere ntaramahụhụ nke obere ma na-abawanye ntaramahụhụ. A kwụsịrị ego n’akpa uwe, zoo uwe, a kwụsịla ịga ụlọ akwụkwọ, enwere ọgụ, esemokwu na esemokwu n’ime ezinaụlọ, a na-echekwa akwụkwọ ozi, ma ọ bụ na-enye onye na-ezigara akwụkwọ ozi ụgwọ ka ọ ghara ibunye 'onye mere ya akwụkwọ ozi'. A gwara ndị enyi na ndị nkuzi ya na ha ga-etinye ya nsogbu, mmerụ ahụ nkịtị site na iti ya ihe bụ oke ntaramahụhụ. A na-ekpochi ụmụ nwanyị n'ime obere ụlọ na-enweghị nri na mmiri, ịpịa ihe kwa ụbọchị na-eme ka edo onwe ha n'okpuru edozighi ha. N'okwu ndị dị oke njọ, mmadụ na-akọ onye uwe ojii ebubo ebubo ụgha, nke nwere ike iweta ntaramahụhụ na-enweghị obi ọchị ruo mgbe ọ bịara doo anya na mpụ ahụ bụ “naanị okpukpe” na-enweghị izubata mmadụ, nwoke idina nwoke ma ọ bụ aghụghọ. Egwu egwu nke ọnwụ ma ọ bụrụ na o sitere n’aka ndị ezinaụlọ nke ya. Ihe a nile bu nnupu isi, obi ilu na egwu. Pọl onyeozi dere, sị: “N'ezie, anyị na-eche ọnwụ anya ogologo ụbọchị nile, ma n'ihe ndị ahụ nile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye hụrụ anyị n'anya.”
• Ndụ ebighị ebi enweghị njedebe
Iji gosi etu ndị ndụmọdụ ime mmụọ na-ekwesịghị isi mee ụdị ọnọdụ ahụ, anyị na-akọ akụkọ banyere ihe mere eme:
Na Bangladesh, otu onye ozi ala ọzọ bịara nwee ike ịchọta otu ụmụ nwoke dị afọ iri na isii ruo afọ 18. Ufọdụ n'ime ha nabatara Kraịst. Onye ozi ala ọzọ ahụ nwere ịnụ ọkụ n'obi dụrụ ha ọdụ, sị: “Lawa n'ụlọ gwa ezinụlọ gị na Jizọs enyewo gị ndụ ebighị ebi!” Nur ul-Alam rubere isi, laa n’ụlọ ma gwa nna ya: “Papa, Jizọs enyewo m ndụ ebighi ebi!” Nna ahụ legidere nwa ya anya wee jụọ, sị: “hasnye nyeworo gị gịnị?” Nwa nwoke ahụ zara: “Nwa ahụ Meri etinyewo mmụọ ya na ịhụnanya ya n'ime obi m. ”Nna ahụ wee kpọọ ụmụ ya ndị okenye:“ Butere mkpụkọ osisi! ”ma nye ha iwu ka ha tie nwanne ha ahụ ruo mgbe mmụọ ọjọọ ahụ ga-ahapụ ya. Nur ul-Alam mechara kwuo, sị: "Ha tiri m ihe ruo mgbe ike gwụrụ ha." Nna ya wee bịa jụọ ya: "you nwere onwe gị ugbu a na mmụọ mba ọzọ batara gị?" Nwa nwoke ahụ zara, sị: "Papa, ndụ ebighi ebi na m bụ ebighebi. Ọ gaghị ahapụ m. ”Nna ahụ kpọrọ ụmụnne ya, sị:“ Butenụ mma! ”Ha dọwaara uwe ya ma gbasaa obe ya n'akpụkpọ aka ya, malite n’olu ruo n’ụkwụ ya. Mgbe nwa nwoke ahụ guzo n'ihu ha na-agba ọbara, nna ahụ bịara ọzọ jụọ ya: “free nwerela onwe gị ugbu a na mmụọ nke aghụghọ ndu ebighi-ebi?” Ma nwa nwoke ahụ ji anya mmiri zaa, sị: “Papa, ị nwere ike igbu m. Ma, m ga-ebi ebighi ebi. Newdị ndụ ọhụụ na Jizọs anaghị apụ apụ apụ n'ahụ m. ”Nna ji iwe were iwu nye ụmụ ya ndị okenye, sị:“ Weta nnu na ose! ”Ha tere mmanụ na-ekpo ọkụ n'ime ya isi ruo n'isi. O tiri mkpu na mgbu. Ha soro ya bere akwa n'ihi na ha chọrọ ịzọpụta ya na hel. Ha enweghị ike ịnagide usoro a ọzọ ma hapụ ya dina n'ime nnu na ose wee pụọ n'ụlọ ahụ. Mgbe nwa oge gachara n’ime abalị, ọ tụbara onwe ya n’ime mmiri ịsachasị ngwa nri ya site n’arụ ya, chọta otu obere ụgbọ mmiri ma pute n’ụlọ onye ozi ala ọzọ ahụ, kụọ aka n’ọnụ ụzọ ma chere.
Mgbe nwoke ahụ mepere ụzọ wee hụ nwa nwoke ọbara kpuchiri ya n'ihu, ọ wụrụ ya akpata oyi wee sị: “Ọ kaara gị mma ịghara ịbanye n'ụlọ m n'ihi na ha na-eso gị n'azụ. Gaa a kilomita ole na ole gaa n’ụlọ ezi-na-ụlọ nke obodo anyị, ha ga-akpọbata gị. ”Nwa nwoke a, nke nwere ọtụtụ obe, ga-apụ n'abalị naanị!
Ndị ozi ala ọzọ ekwesịghị iji nchigharị na-eto eto dị ka ọtụtụ na ha nwere ụzọ ndị ọdịda anyanwụ, kama ha kwesịrị ịghọta gburugburu ha, nwee mmetụta ma taa ha ahụhụ ma buru ibu ọrụ maka ha.
• Amamihe na ikwesi ntụkwasị obi dị mkpa
Agaghị akpọ onye mbido okwukwe ngwa ngwa ka ọ gbaa akaebe ya; nwa amụrụ ọhụrụ enweghị ike ije ije na ikwu okwu. Onye kwere ekwe ohuru kwesiri ibu ụzọ tozu oke n’okwu, amamihe, ekpere na ihunanya, rue mgbe o nwere - ezigbo okwu, n’oge kwesiri - ikwuputa okwukwe ya. Ọtụtụ mgbe ọ nweghị ike ịgwa ndị ezinụlọ ya okwu n'ezoghị ọnụ, mana ọ nwere ike ịgba akaebe site n'ụzọ ndụ ya, ije ozi ya, obiọma ya na ekpere ya na ihe ọhụụ abanyela na ndụ ya.
Onye na-agbanwe agbanwe ekwesịghị ịhapụ ụlọ nna ya n'ihi esemokwu na nrụgide. Ọ bụrụ na atụpụrụ ya site n'ọnụ ụzọ ihu, ọ ga-abanye n'ọnụ ụzọ azụ. Onweghi onye hụrụ ya n’anya karịa nne na nna ya! Ọ gbachi nkịtị, ọrụ olu ya na nsọpụrụ nne na nna ya na-ekwu okwu karịa nke ọma karịa okwu nwere ike ibute ịkpọasị na iwe. Agbanyeghị, ozugbo ndụ ya nọ n'ihe ize ndụ, onye ndụmọdụ mmụọ dị nsọ, ndị otu ma ọ bụ ụka nke onye tụgharịrị nwe, ga-akpọrọ ya, chebe ya ma kwado ihe ndị ruuru ya. Mana n'inye ụdị enyemaka ahụ, ha ga-akpachara anya na-ejide ndị agadi, ebe iwu anaghị anabata ya.
Ndi ha na ha g’ekwekorita n’agha g’ekwe itughari ha ma ha kwere na Kraist. Awayda Islam bụ otu n'ime ihe ole na ole nwanyị ga - achọ ịgba alụkwaghịm. Mgbe ahụ ọ bụ ụmụ ya bụ naanị ya. Ọ bụrụ na di gbara nwunye ya alụkwaghịm n’ihi nkwenye ya na Kraịst, ọ ga-efuru ụmụ ya ihe niile, a ga-achụpụ ya n’ụlọ. Anyi apughi ighota ahụhụ nke ndi nne ụfọdụ n’ihi Jesu n’uwa ndi Islam.
• Cazọ mgbapụ na enweghị detours
Ndị Alakụba na-eme ụdịrị ihe ọjọọ ahụ dịka ịta ha ahụhụ na igbu ndị ezinụlọ nke ha. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị Alakụba niile na-emesapụ aka ma ọ bụ nwee ntakịrị ihe gbasara okpukpe. Ma ka ha ghara iwepu aha ha na nnabata nke ndị Alakụba, ha agaghị enwe ike idobe onye nnupụisi n'etiti ha. Ha na-anwa ikewapụ onwe ha na onye si n'usoro ahụ pụọ, ma ọ bụ kwe omume ziga ya mba ofesi.
Ma otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị Alakụba na-egosipụta ịkpọasị ha mgbe otu onye n'ime ndị otu ezinụlọ ha chigharịkwuuru Jizọs. Ha aghaghi ita ya ahụhụ iji zoputa ya, ma obu ozo, ha nwara ibibi ya. Nye ndị otu abụọ ahụ ọ bụ ihe nwute mgbe otu n'ime ha ghọrọ onye nke Kraist, mana ole na ole bụ ndị okpukpe ha zuru oke ma na-akwado igbu onye na-emebi iwu.
N'oge ndị ọhụrụ kwere ekwe nọ n'ihe ize ndụ anaghị eche ogologo oge, kama gbaa ọsọ tupu e gbuo ha. Ha na ndị enyi ha zoo zoo ma ọ bụ gbaga mba dị iche iche aha ha.
Nchigharị nke na - abụbeghị nnwere onwe “m” ma bi na “anyị” nke ndị ezinụlọ ya chọrọ iduru ndị ikwu ya kacha nso na Jizọs mgbe ọ natara mmụọ nke ịhụnanya Kraịst mgbe a tọghatasịrị ya. Mana nke ahụ bụ ihe kpatara ha jiri jụ ya ma kpọọkwuo ya asị (Jọn 16:1-4). Agbanyeghị na ndị kwere ekwe ọhụụ na-arapara n'okwukwe nke akaebe nke Pọl onyeozi onye gbara onye na-elekọta ụlọ mkpọrọ okwu, “Kwere n'Onyenwe anyị Jizọs, a ga - azọpụta gị - gị na ezinụlọ gị” (Ọlụ Ndịozi 16:31).
Ọ bụ na anyị agaghị agbaghara ndị tọghatara ahụhụ a? Ugboro ugboro, ndị kwere ekwe na-ajụ, sị: "Ọ bụrụ na ichigharịkwuru Jizọs na-akpata ụdị ihe mgbu a, ọ́ bụghị ebere karịa ikwe ka ndị Alakụba nọrọ n'okpukpe nke ha?" Ọ bụrụ na otu onye na-arụ ụka n'ụzọ ahụ ọ ghọtara Muhammad na Kraist. Na Islam enweghị nzọpụta, enweghị mmesi obi ike na agbagharawo mmehie, enweghị mgbapụta, enweghị udo ọ bụla, enweghị mmụọ nsọ, enweghị ndụ ebighi ebi. Onye Alakụba na-enweghị Jizọs Kraịst furu efu ma nwụọ n'ụzọ ime mmụọ! Ọkpara Chineke naanị ya nwere ike ikwu, “Mụ onwe m bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Onweghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ” (Jọn 14:6). O dighi uzo ozo diri ezi Chineke ma oburu na obe! Ọ bụrụ n ’ịchọrọ igbochi ndị ntụgharị na-ata ahụhụ, ị dị ka Pita nke chọrọ igbochi Jizọs ịbanye na obe (Matiu 16:22-23). Azịza gbara ọkpụrụkpụ Jizọs nyere gbasara ndị niile chọrọ igbochi ndị kwere ekwe ọhụụ nhụjuanya.
Onye-nwe-anyị kwuru n’ụzọ doro anya, “Onye ọ bụla hapụrụ ụlọ, ma ọ bụ ụmụnne ndị nwanyị, ma ọ bụ nna ma ọ bụ nne ma ọ bụ ụmụ, ma ọ bụ ubi, Mụọ Ozi Ọma ga-anata okpukpu otu narị, wee keta ndụ ebighi-ebi (Matiu 19:28-30; Mak 10:29; Luk 18:29). Jizọs gara n'ihu gaba n'ihu, sị, “Onye ọ bụla hụrụ nna ya n'anya ma ọ bụ nne ya n'anya karịa m ekwesịghị m; onye ọ bụla hụrụ nwa ya nwoke n’anya ma ọ bụ nwa ya nwaanyị karịa m ekwesịghị m; onye ọ bụla nke na-achọghị iwere obe ya soro m, ekwesịghị m. Onye obula nke huru ndu ya g’atufu ya, onye obula tufuru ndu ya n’ihi m ga-acho ya” (Matiu 10:37-38; 16:24-25; Luk 9:23-26; Jọn 12:25).
O di nfe ikwu ma o bu dee okwu ndi a nye ndi ozo, ma o bu ihe siri ike diri ha. Yabụ na ọ bụ ọrụ dịịrị anyị ịnabata ndị kwere ekwe nile ndị a kpagbuworo n'ihi ezinụlọ nke mmụọ ma lekọta ha ruo mgbe ha nwere ike ilekọta onwe ha.
N’oge onye ichegharihu na-aga n’ihu n’ihu mmụọ ma na-esonye “anyị” nke ezi na ụlọ ya, ọ na-eche ọnwụnwa ndị pụrụ iche ihu ọ ga-emerịrị, n’agbanyeghi na ya na okwukwe.
• Gini bu nkpughe?
Dịka onye Alakụba, onye chegharịrị echeworị na akwụkwọ nile ekpughere dịka Torah, Abụ Ọma, Oziọma na kor'an sitere na akwụkwọ mbụ dị na mbara igwe wee mekọrịta onwe ha. Ma ọ naghị ewe ogologo oge rue mgbe onye ntụgharị ahụ chọtara ọdịiche na-enweghị mgbagha dị n'etiti Akwụkwọ Nsọ na kor'an. Ozi Ọma na-agba akaebe na Kraist bụ Ọkpara nke Chineke ugboro iri ise, kor'an gọnarịrị ya ugboro iri na asaa. Akuko ubochi ikpeazu na ndu Jisos kachasi nma na ahuhu ya nile na onwu ya. Ma kor'an na-ekwu, "Ha egbughị ya, ha akpọgidere ya n'obe. Emere ya ka ọ puta ìhè otú a” (Sura al-Nisa' 4:157). Ozioma ekpughere ugboro 187 na Chineke bụ Nna na Nna anyị. Ogbenye, kor'an kwuru na Allah abughi nna, na onweghi onye dị ka ya (Sura al-Ikhlas 112:1-4). N’ime Akwụkwọ Nsọ anyị gụrụ banyere ịlụ otu nwanyị, ihe amachibidoro ịgba alụkwaghịm, maka ịgbaghara ndị iro mmadụ, yana maka mmụọ nsọ ibi n’ime ndị na-eso Kraịst. N'ime Akwụkwọ Nsọ ndị Alakụba, Allah kwere ka ịlụ karịa otu nwanyị, ịgba alụkwaghịm bụ ihe ruuru di mgbe ọ bụla masịrị ya, enwere ọrụ Chukwu maka ịbọ ọbọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ọbara, ọ gaghị ekwe omume onye ọ bụla ịnweta mmụọ Chineke - Allah naanị ya dị mma! Ndị ọzọ niile bụ ndị ohu ya - ya bụ Jizọs na Mmụọ Nsọ!
Ya mere ndi ncheghariri ji juo ajuju a: Olee akwukwo nwere ezi mkpughe, oleekwa onye nke bu okwu nlere ma obu onye ugha? Ajụjụ a abụghị site n'èzí. Ọ na-esite n’ime ya, ya n’obi. Anyị ekwesịghị inye azịza ha nke ọma. Ya onwe ya aghaghi ichota eziokwu, ka o nwee ike iguzogide mbibi nke ezi na ulo ya. Anyị ga-esonyere ya n’ekpere, iji duzie ya n’amaokwu ndị dị na Bible, ichebara ya echiche n’oge nsogbu ya niile, rue mgbe ya onwe ya ghọtara site n’Okwu Chineke: Nanị Bible bụ ezi Okwu Chineke! O juputara na ndu na ike. Kor'an na-eduhie, ọ bụ mkpughe ekpughere na ngwaahịa nke mmụọ na-emegide Akwụkwọ Nsọ.
• A gaghị agbaghara mmehie
Ọnwụnwa nke abụọ nwere ike imetụta ịdị adị nke onye kwere ekwe ọhụrụ. Kor'an na-egosi na agbagharaghi mmehie atọ.
Onye ọ bụla bụrụ onye bụrụ ọnụ na agbakwunye chi ọzọ na Allah (Surah al-Tawbah 9:29).
Onye ọ bụla nke hapụrụ Islam ma bụrụ Onye Kraịst bụ onye a bụrụ ọnụ ugboro atọ (Surah al-Baqarah 2:161).
Iwe nke Chineke dakwasiri onye gburu onye Alakụba na ebum n'uche ya, n’enweghị ihe mgbapụta (Sura al-Nisa ’4:93).
Onye ọ bụla kpọrọ onye Alakụba ka ọ bịakwute Jizọs, n'otu oge ahụ kpọrọ ya ka ọ mee mmehie abụọ na-enweghị mgbaghara, nke dị na Islam kwekọrọ na mmehie megide mmụọ nsọ na Oziọma. Ọ bụrụ na a ga-agwa Onye Kraịst okwu ekwugide ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu, ọ gaghị na-atụgharị uche ma jụ iwe ya. Ihe mgbochi nke obi nke onye chigharịrị aghaghị imeri yiri ya. Ọ ghaghi iwere imebi ihe dị nsọ nye ya tupu eme ya, iji nweta Kraist na ndụ ebighi ebi. Anyị ekwesịghị ịmanye ya ime mkpebi ọkụ ọkụ, kama anyị ga - esonyere ya n’ekpere na ndụmọdụ, ma nyere ya aka gbanye mkpọrọgwụ, nwee ntụkwasị obi na nkasi obi n’Oziọma (Ndị Rom 8:14-16; 1 Ndị Kọrịnt 12:2-3) .
Maka ntiala Islam, enwere nti banyere nkowa na kor'an nke mere na onye obula nke kewaputere Islam ga-atufu iru oma ya ma o nweghi ihe igosi n’ikpe nke Chineke nke puru ime ka mmebi iwu ya guzosie ike (Suras al-Kahf 18 : 105; al-Zumar 39:65; et al.). Ma Kraist mesiri ya obi ike: “amaram ezuola gi! Oru gi ezughi igosi gi imebi. Bloodbara obara nke Gi bu ezi omume gi!
• Mara ikpe ọnwụ
Erere ilu nke onye na-agbanwe agbanwe ga-eri bụ mkpebi nke dịka, site na Shari'a, onye nnupụisi ga-anwụrịrị” (Sura al-Baqara 2:217). N'ụzọ na-eju anya, kor'an ekwughi na “aghaghị” egbu ya. Eziokwu a mere ka ndị ọka iwu Alakụba nyochaa ọdịnala Muhammad ka ma nkwupụta ọ bụla "nke nkwupụta" ya chọrọ ka ogbugbu onye Alakụba gbuchara. Ma ebe ọ bụ na igbu onye Alakụba ikpe maka ihe ekwughị nke ọma na kor'an ekwenyeghị n'iwu, ndị ọka iwu kwalitere iwu ka e gbuo ndị tụgharịrị site na nkwekọrịta nke ndị ọka iwu Alakụba. Ha dịgasị nanị n’ajụjụ banyere ogologo oge iji mee ka nchegharị n’ụlọ mkpọrọ nwee ike ịdị tupu e gbuo ya. Fọdụ na-ekwu ụbọchị atọ, ndị ọzọ otu ọnwa zuru oke, nke oge aga-akọwara Alakụba ọzọ nye onye si n’ezi ofufe dapụ iweghachite ya na mkpọrọgwụ ya. Ọ bụrụ n'eziokwu na ọ jụrụ ugboro ugboro oku ahụ, a ga-ebupụ ntaramahụhụ ya.
Otutu Alakụba ndị Alakụba, anaghị egbu egbu ndị tụgharịrị! Ihe ndị ruuru mmadụ na-emegide iwu Shari'a. Yabụ na steeti Alakụba na-anabata echiche jụrụ iwu nke Islam. Ha rụtụrụ aka n’otu amaokwu na kor'an na-ekwu maka “ọnwụ” nke onye mgbapughi naanị, mana ọ bụghị nke “igbu” ma ọ bụ “igbu” ya (Sura al-Baqara 2:217). "Allah ga-ekpe ya ikpe ma hapụ ya ka ọ nwụọ otu ụbọchị, gọọmentị enweghị ikike igbu ya", ụfọdụ ndị ndụmọdụ gbasara iwu steeti kwuru.
Ndị otu ọdịnala n'etiti ndị Alakụba na-eche n'ụzọ dị iche. Ha na-achọ ka atumatu iwu nke Shari'a dị otu mgbe na igbu onye ọ bụla na-emebi iwu na-enweghị obi ebere. Maka nke ahụ, ndị kwere ekwe ọhụrụ na Kraist ndị eboro ebubo na-enyoghi enyo, na-atụ ha mkpọrọ, na-enyocha ha, na-emekpọ ha ọnụ, ma na-ejidekwa ha ka ọnwa gafere, rue mgbe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba ọzọ ma ọ bụ ndị isi ala etinye okwu ha iji mee ka ha nwere onwe ha. Mgbe ha nọ n’ụlọ mkpọrọ, ekwere ụfọdụ n’ime ha nkwa: ọ bụrụ na ikwuputa okwukwe ndi Alakụba ugboro abụọ, a ga-ahapụ gị ozugbo. Otu nne a tụrụ mkpọrọ zara, “Ọ kaara m mma ijigide Jizọs Kraịst kama ilekọta ụmụ m na-enweghị Kraịst.” Mgbe nna, n'ihi ụmụ ya, kwupụtara nkwenkwe ndị Alakụba ugboro abụọ, ha chịrị ya ọchị ma gwa ya, “You naanị eme ka ị nabatala Islam ọzọ maka ụmụ gị. N'ime obi gị ị bụrụ Onye Kraịst. Ya mere, ị gaghị ahapụ gị.”
Ọtụtụ Ndị Kraịst nọ na West na Korea amaghị ihe ọ pụtara na onye Alakụba ịghọ Onye Kraịst. N'ebe steeti na-emesapụ aka na-anaghị egbu ndị si n'ezi ofufe dapụ, ọ dị mkpa ka ndị ikwu ya ịgbalị ikpochapụ aha ọjọọ ma kpochapụ omume 'enweghị nsọpụrụ'. Na Saudi Arabia na Iran, nakwa na Pakistan na steeti ndị na-agbakọ iwu Alakụba, a na-ebupụ ntaramahụhụ ọnwụ n'ihu ọha site n'aka ndị si n'ezi ofufe dapụ. Onye nnọchi anya eze nke Morocco, Hassan II, ndị nnọchi anya Amnesty International jụrụ oge, zara: "Na mba anyị, anyị nwere iwu bụ isi: Allah, eze na mba ahụ. Mgbe mmadụ bịara ma jigide na enwere okpukpe ka mma karịa Islam, anyị ga-enyocha ya n'aka ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa iji chọpụta ma ọ ka dị ya n'obi. Ọ bụrụ na ọ dị otu a wee na-aga n'ihu na-ekweghị ekwe anyị, anyị ga-ata ya ahụhụ. ”
• Niile Ndị Kraịst bụ ndị Alakụba?
Ọnwụnwa kachasị nke onye kwere ekwe ọhụụ ga-eche ihu sitere na ndị ozi ala ọzọ nwere obi ọma. Na kor'an ha ghotara amaokwu abụọ na-ekwu na ndị niile na-eso ụzọ Kraịst bụ ndị Alakụba (Suras Al 'Imran 3:52; al-Ma'ida 5:111). Ndị na-agụ akwụkwọ ahụ na-agụ akwụkwọ adịghị, ahụghị na amaokwu abụọ a bụ ọnya na-emeghe emeghe, nke Muhammad tụkwasịrị ndị nnọchi anya Ndị Kraịst si Northern Yemen. N'amaokwu ndị a, o mere ka ndịozi Kraist kwupụta na ha bụ ezigbo ndị Alakụba, nke mere na bishọp na eze si Wadi Nadjran kwesịrị ịghọta: Ọ bụrụ na ndịozi Jizọs bụ ndị Alakụba - yabụ anyị kwesịrị ịbụ ndị Alakụba-Ndị Kraịst! Mgbe ahụ, a ga-ahapụ anyị n'udo ma ghara ịkpagbu anyị. Ma eze na bishọp nọ na nche n'ụzọ ime mmụọ ma ghara ịdaba n'ọnyà ahụ. Ha nọgidere bụrụ Ndị Kraịst ma merụọ ha ma chụpụ ha n'obodo ha mgbe afọ ole na ole gachara. Taa aziza a na-ekwu okwu Muhammad na mba ndị Alakụba ọzọ: “needkwesighi ịgakwuru Kraist n'ezoghị ọnụ. Kwere na Allah na Muhammad! Inwere ike ịbụ onye Alakụba na onye Kristi n’otu oge. Dị nnọọ ka e nwere ndị Juu bụ́ Mesaya, a ga-enwekwa Ndị Kraịst Alakụba! ”
Ndị amụma ụgha ahụ amabeghị Islam ma ọ bụ na ha atụle okwu ikpe Jizọs na Pọl onyeozi. Alakụba bụ mmụọ nke emegide ndị Kraịst (1 Jọn 2:21-25 na 4:1-5) ma na-anọchite anya mkpughe na-ezighi ezi site n'aka mmụọ ozi dara ada (Ndị Galeshia 1:8-9). Ekwewo ndi Alakụba na mmụọ jikọrọ ọnụ ma ọ dị mkpa ịhapụ ya n'ike nke Kraịst. Y’oburu n’inwere ike izisa ndi Alakụba ozi n’ekwesighi Ọkpara Chineke a kpọgburu n’agha ga -ekpe gị ikpe site n’okwu Jizọs na Matiu 10:32-33; 16:23-25; Ndị Rom 1:16-17; 1 Ndị Kọrịnt 1:18-24 et al.
Onye isi mbubreyo nke onye isi ala nke Sudan Turabi jiri ohere a mee ihe amaokwu abụọ a site na kor'an wee kwuo n'ihu ọha na Ndị Kraịst niile nọ na Sudan bụ ndị Alakụba na ụmụ nwoke ndị Kraịst nwere ike ịlụ ụmụ agbọghọ Muslim Sudan. N'ime ime nke a, ọ gbasoro ije ụkwụ Belam bụ onye dụrụ Balak ọdụ ka ọ mata ndị ya site na ịlụ ụmụ Israel agwakọtara ya. Otu a omenala dị iche iche nke ndị otu ga-eloda ndị Israel nile n’ime afọ ole na ole (Onu-ọnụọgụ 31:16; 2 Peter 2:15; Jud 11; Nkpughe 2:14). Ndị ọka iwu Saudi-Arab katọrọ Turabi ka ọ katọọ ụzọ o si emegide ndị Alakụba.
• Ihe odide – njehie?
Ebumnuche nke ndị nkuzi nke ịkọwa ihe doro anya. Ọ bụrụ n’onye nchegharị gosipụtara dị ka onye Alakụba ma bụrụ onye Alakụba, ma bụrụ Onye Kraịst n’otu oge ahụ, ọ gaghị ata ahụhụ, ihe mgbu na ọnwụ, ọ ga-anapụtakwa ụka ya na nsogbu, ihe egwu na ịchụ àjà. Ma ndị nkuzi ahụ leghaara eziokwu ahụ anya na mmadụ enweghị ike ịgwakọta mmiri na ọkụ, ma abalị ahụ na-agba ọsọ site n'ehihie. Dusk pụtara naanị dị ka mgbanwe, ọ bụghị dị ka ọnọdụ na-adịgide adịgide!
N'Ijipt, onye ozi ala ọzọ nke gbara ama ama nyere Jizọs onye ọrụ ndị ọzọ ihe nzuzo ya ma mesie ya obi ike na ọ nwere ike ịbụ onye Alakụba ma bụrụ Onye Kraịst n'otu oge ahụ. Onye uwe ojii ahụ nwere echiche a dị ụtọ n'ihi na otu ụzọ a ga-esi emepere ya ọnụ ụzọ ọmụmụ ihe abụọ. Ọ meriri ọtụtụ ndị Alakụba maka ụdị ọgbaghara a. Ma mgbe otu afọ na ọkara gachara, ọ chere na ya abụghị azụ ma ọ bụ anụ ahụ, ma ọ bụ ezigbo onye Alakụba ma ọ bụ ezigbo onye Kristian, ma chọọ ka e mee ya ụka ọzọ. Mgbe nke a gasịrị, ndị ọrụ ibe ya sitere na ọrụ nzuzo boro ya ebubo na ọ dapụrụ n'okpukpe Islam wee taa ya ahụhụ na ntaramahụhụ ọ jiribu tupu iweghachite ndị Alakụba. Ma ọ nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi nye Jizọs ma nwee ike ịgbaga mba ọzọ site n'enyemaka nke ndị enyi.
Obere oge ka nke ahụ gasịrị, ndị otu ahụ gbawaranụ dakwasịrị ma daa n'ụlọ mkpọrọ. Akwụkwọ akụkọ ụbọchị niile were iwe were isi okwu dere, sị: "Anụ ọhịa wolf Christian dị na ọdọ atụrụ ndị Alakụba na-anwa iduhie ndị Alakụba na-amaghị ihe!" Ndị ezinụlọ ndị si mba ọzọ nọ n'ụlọ mkpọrọ tọhapụrụ site n'ọfịs obodo nke steeti ha izu ole na ole ka e mesịrị, a chụpụrụ ha n'Ijipt.
Ndị enyi ahụ nwere ezi ebumnuche, ma eleghị anya ha amatabeghị na ọrụ n'etiti ndị Alakụba ka a ghọtara dị ka mkpagbu na ọ bụ mmebi nke udo. Dabere na kor'an, mmebi a siri ike karịa igbu ọchụ (Sura al-Baqara 2:217). Onye obula kpatara nsogbu na obodo, aghaghi igbu ya ma obu kpogide ya. Ọzọkwa, enwere ike merụọ ya otu aka ya na ụkwụ ọzọ, ma ọ bụ chụpụ ya n'obodo ahụ (Sura al-Ma'ida 5:33). Dabere na kor'an na Shari'a, ozi bụ mpụ isi. Ndi kwesiri iduhie ya na ndi atapuru ahu agha kwesiri ka ha maa ha ikpe onwu, ma ha buru ndi oru ulo-ikwuu-ozi ma obu ibi ndu dika ndi Alakụba.
Onye akaebe nke Kraist onye yi uwe dị ka onye Alakụba ma mee ka ọ bụ onye Alakụba mana n'ezie bụ ohu Kraist, a na-ahụta dịka iwu si bụrụ onye Alakụba na-enupụ isi, dịka iwu Alakụba si dị, ọ dabakwara na ntaramahụhụ ọnwụ. Na mgbakwunye, a na-ewere ya dị ka onye ihu abụọ, onye wayo na onye jụrụ okwukwe. Dabere na Shari'a enwere ike igbu ya ozugbo, enweghị mkpebi ọ bụla.
Onye Alakụba amachaghị iwu zuru oke nke Shari'a ya. Onye obula n’agha n’etiti ndi Alakụba agaghị eduru onye na-achọ Jizọs ọsọ ọsọ na elu. Nke ka nke, ekwesighi ime ha baptizim n’oge. Onye na-eto eto kwere ekwe kwesịrị ịma ihe tobụ Onye Kraịst pụtara. Ntozu oke nke mmụọ dị mkpa karịa akụkọ na-atọ ụtọ nke ọtụtụ ndị emerela baptizim. Ogo ga-abịa tupu oke!
Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eche maka ụzọ dị iche iche ndị a banyere otu ndị Alakụba si pụta na ọha Alakụba, ezinụlọ na ezinụlọ, ọ nwere ike ịghọta na onye chigharịrị nwere ike itinye okwu nke onyeozi nke Paul:
N'iru Gi ka ayi nānwu ọnwu ogologo ubọchi; a na-ahụta anyị dị ka atụrụ a ga-egbu. Mana, n’ime ihe ndị ahụ niile anyị karịrị ndị mmeri site n’aka onye hụrụ anyị n’anya. N’ihi na ekwenyesiri m ike na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ihe niile e kere eke agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke nke ahụ. na Kraist Jizos Onyenwe anyi. (Ndị Rom 8:36-39)
Ntinye n’ime ụka dị iche iche na-egosipụtakarị dịka akụkụ kachasị emetụ n'ahụ nke nnukwu nsogbu atọ a sitere na ndị si Alakụba, ndị na-eso Kraịst, nwere ike ịta ahụhụ. Ọtụtụ ụlọ ụka Ọtọdọks, Roman Katọlik na ndị Protestant na Eshia na Africa, na mgbe ụfọdụ kwa na Europe, anaghị anabata ndị kwere ekwe ọhụrụ site na Islam. Enwere ike depụta ọtụtụ ihe kpatara mkpebi a dị ka ndị a:
• Oge ụfọdụ ndị Alakụba na-eche enyemaka maka ego ma dị njikere ịgbanwe okpukpe ha dịka uwe-uwe maka ego ụfọdụ - mana ọ kachasị elu, ma ọ bụrụhaala na ego ahụ ga-adịgide. "Onye nri ị na-eri, ị bụ abụ ya!"
• Nwa agbọghọbịa kwere na Kraịst na - ewetara nwa agbọghọ Alakụba ka o mee baptizim, ka o wee lụrụ ya. Ha maara na ọha na eze anabataghị alụlụ di na nwunye. Uche dị otú a nwere ike ịdị mma n'akụkụ abụọ, mana ebo, iwu na ọha mmadụ na-emegide ya. 'Dị ‘ngbanwe’ a anaghị eme ihe n’eziokwu, ọ na-akpatakwa nsogbu.
• N'usoro iwu Alakụba maka ndị pere mpe, ihe ọ bụla banyere ụdị ozi ala ọzọ n'etiti ndị Alakụba ka amachibidoro ndị amaala Ndị Kraịst amaokwu (Sura al-Baqara 2:217; al-Ma'ida 5:33). Parish nke nakweere izisa ozi ọma n'etiti ndị Alakụba site na “otu” nke ndị otu ya kwesịrị ata ahụhụ ma mechie ya. Anyi gha ighota na ndi nchu aja, ndi ozuzu aturu, na ndi bishọp na-elezi anya nke oma na o dighi onye otu nzuko ha nke ga esonye na oru ozioma obula n’etiti ndi Alakụba n’ihu ọha ma ọ bụ n’iwu nke òtù na-achị isi na ụka ha, n’ihi na n’ụdị ahụ a ga-emechi ụka ha. gọọmentị.
• Ufodi ndi otu ozioma nke ala ozo ma obu nke mba n’agha na ewere ndi Alakụba nwere mmasi na parish nke ụka ka onye ukọchukwu mee ha baptism ma were onye kwere ekwe ọhụrụ. Mgbe ahụ ọ tụrụ ha n'anya na ndị okenye nwere ibu ọrụ gosiri enweghị mmasị ma jụ ịnabata onye bịara ọhụrụ. Nke ahụ bụ ihe kwere nghọta, maka na otu ọgbakọ na-aga agha ekwesịghị ịrụ ọrụ na-enweghị ụfọdụ ndị okenye, ndị tinyekwuru ọrụ ha ma kwado ya. Ekwesịrị ịgwa ndị okenye ahụ tupu oge eruo, ka ha wee nwee ike ịkwado ọrụ nke ndị nọ n'ọrụ site n'ekpere ma dịrị njikere ịnabata ndị kwere ekwe ọhụrụ n'ime ezinụlọ ha iji chebe ha pụọ na mwakpo niile, ma duzie usoro ndị ọzọ.
• Nnụnụ na-achọ iyi akwa na-ebu ụzọ akpa akwụ ya, ọ bụghị ụzọ ọzọ gburugburu! Ndị enyi niile dị njikere ịrụ ọrụ mgbasa ozi ọma na mba ndị Alakụba kwesịrị ibu ụzọ wuo otu ekpere n'ime ma ọ bụ na mpụga ụlọ ụka ndị dị adị, ndị na-akwado ọrụ, mkpa na ibu ọrụ. Ọ bụrụ na mmadụ akpọkọta ndị otu ekpere, ọ ga-ahụ ọtụtụ mkpụrụ n'ikpeazụ karịa ụdị ịgba ume ga-ahapụ ubi ahụ n'oge na-adịghị anya. Onu ogugu di ole na ole na nzuko uka obula nke na akwadoro na izisa ozi n’etiti ndi n’abughi ndi Kristian. I ghaghi ikpe ekpere icho ha.
• Mkpakọrịta na obodo
Ọ bụrụ na onye Alakụba, n'oge mgbanwe ime mmụọ ya na mgbe a chụpụrụ ya n'ụzọ na-egbu mgbu na ndị obodo ya gbakwunyere mkpakọrịta nke ndị kwere ekwe ma ọ bụ ọbụna na chọọchị ma ọ bụ na-agba mbọ ịkpọtụrụ Ndị Kraịst, ndị ụkọchukwu na ndị ụkọchukwu, ọ na-awụ akpata oyi n'ahụ nke ukwuu. O nwere mmetụta: ha anaghị atụkwasị m obi! Ha chere na m bụ onye arịrịọ, ma ọ bụ achọrọ m iduhie otu n'ime ụmụ ha ndị nwanyị, ma ọ bụ na ha eche na m bụ onye nyocha! Ọ dị ka a wụsara ya bọket mmiri jụrụ oyi mgbe ọ ka na-abanye n'ọnụ ụzọ Ndị Kraịst!
N’ezie, ndi Alakụba na-eji okwu dị iche iche eme ihe na ndụ kwa ụbọchị karịa ọtụtụ Ndị Kraịst na, ọ bụrụ na ha na-eji otu mkpụrụokwu eme ihe ha pụtara. Ha na-eyi uwe ma na-eme ihe dị iche na Ndị Kraịst ka ndị obodo ahụ wee chọpụta ngwa ngwa iche. Akụkụ abụọ a nwere mmetụta nke mgbidi ahụ a na-adịghị ahụ anya.
Ihe ntughari choro ihe mbu bu ntụkwasị obi, nghota na ihunanya! Beliemụnna nwoke na ndị nwanyị, ndị na-ekpe ekpere kwesịrị ịbịa zute ya, ịgwa ya okwu, kpọọ ya n'ụlọ ha ma mee ka ọ chee: are bụ otu n'ime anyị, anyị bụ otu! Mana ezinụlọ ekwesịghị inwe ụmụaka ndị ga-alụ di ma ọ bụ nwunye, ha ekwesịghị ịkpọ ụmụ akwụkwọ ịkpọ òkù ahụ ụzọ, n'ihi na ọ bụrụ na nke ahụ, a ga-aghota ọkpụkpọ òkù ahụ.
Parish, odi odi nma iburu akuko ebe onye amu amu amu amu ghuru obi n ’ulo. Mkpakọrịta n'etiti ndị na-eso Jizọs bụ 'anyị' ọhụụ maka ya, nke ọ chọrọ na nke ọ chọrọ mgbe achusịrị ya na ezi na ụlọ ya. Parish bụ ezinụlọ ọhụrụ ya ewezuga mmadụ ole na ole nwere ike ịnwụ. Ọ dị mkpa ịkwadebe obodo ịnabata ndị tụgharịrị, dị ka ọ dị mkpa iru eru.
Ndị okenye na ndị ụkọchukwu ekwesịghị ịgba onye kwere ekwe ọhụrụ ume ka ọ gbaa akaebe banyere okwukwe ya site n'ụlọ ụka ma ọ bụ n'ụlọ elu. Ọ ga-abụ ihe na-akwụghachi ụgwọ iji mee ka onye ntụgharị yie ihe dị ukwuu ma dị mkpa - ọ ga-agbawa ọsọ dị ka ụda ọkpọ. Ekwesịrị inye ya obere ọrụ n'ime obodo yana ọrụ dịịrị n'ime otu ahụ, nke mere na ọ na-eche na a nabatala ya ma mesoo ya ka ndị ọzọ. Dịka anyị, ọ bụ onye mmehie n'onye amara site n'amara nke Chineke.
Mgbe ezi nke ndi otu Kristi nabatara onye chighariri, ha ga - echekwa ya. Ile Ọbịa na nso East dị nsọ nye ndị Alakụba na Ndị Kraịst. E nwere otu nwanna nke gbochiri ụzọ ịbọ ọ́bọ̀ ndị ikwu n'ọnụ ụzọ wee gwa ha: naanị ozu m ka ị nwere ike iru nwanne anyị nwoke gbara ọsọ! Omenala ndị Alabia nabatara ile ọbịa nwere nkụda mmụọ.
• Ọsụsọ nke isi gị ka ị ga-eri nri gị!
Mgbe onye Alakụba ghọrọ Onye Kraịst ma ka bi na mpaghara ndị Alakụba, ọ ga-atụpụkarị ọrụ ya n'ihi na a na-elele ya anya ka Allah, ndị mmụọ ozi ya na ndị Alakụba niile (Sura al-Baqara 2:161). Maka ha, ọ bụ onye na-adịghị ọcha (Sura al-Tawba 9:28). O nweghi onye Alakụba kwesịrị inwe mmekọrịta na onye na-eri anụ ezi na onye na-a drinkụ mmanya ugbu a ma ọ bụ nye ya ọrụ!
Ọ bụ ọrụ dịịrị onye ụkọchụkwụ nke parish ma ọ bụ onye ndu ozioma ịchọta ma ọ bụ mepụta ọrụ maka ndị kwere ekwe ọhụrụ na Kraịst. O zubeghị ịkpọ ndị ezinụlọ ntụgharị ọhụrụ maka nri ehihie maka ezinụlọ n'otu oge. N'ikpeazụ nke ahụ bụ okwu na-eweda mmadụ ala. Ọzọkwa, a gaghị enye ndị na-agbanwegharị obere onyinye ma ọ bụ nnukwu onyinye. A ga-ele nke ahụ anya dị ka ihe ihere nye onye Alakụba na-asọpụrụ! Ha abụghị ndị arịrịọ, kama ha bụ ụmụnne. Ihe ha chọrọ bụ ọrụ siri ike ma ọ bụ ọzụzụ maka ọrụ ha. Fọdụ n’ime ha ga-amụtadị ịrụsi ọrụ ike. Enwere ọtụtụ nsogbu na mpaghara a.
Otu pastọ ka a na-ese ụlọ nzukọ ụka ya ọtụtụ ugboro n’afọ, iji mepụta ndị na-agbanwegharị. Ọ chọrọ inyere ha aka n'ụzọ ọ bụla. N'ụzọ ahụ, o mere ka ha nwee mmetụta nke ịrụ ọrụ bara uru. Ndị ụkọchukwu ndị ọzọ gwara ha ka ha gbue osisi, gwuo n'ime ogige ahụ, hichaa ụlọ na ogige ya, rụọ ọrụ dị ka ndị ozi, ụdị odide, sụgharịa ntụgharị, ree akwụkwọ ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị ọzọ, iji nye ha ezigbo ọrụ ọ bụghị naanị baksheesh.
Ndị na-agbanwe agbanwe anaghị enwekarị ọzụzụ aka ọrụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ zuru ezu n'ụlọ akwụkwọ. Girlsfọdụ ụmụ agbọghọ chọrọ ọzụzụ n ’ịkwa akwa, ụmụ okorobịa na kọmputa, nyocha ka ọkwọ ụgbọ tagzi ma ọ bụ inweta ohere agụmakwụkwọ iji gụchaa ụlọ akwụkwọ. Ihe niile ahụ na-efu ego. Ekwesighi inye ego a n'ebughi oge, kama nyekwa ya dika mgbazinye ego iji laghachi. Na mbido, ekwesighi inye nnukwu ego. Naanị mgbe ejiri ntakịrị ihe kwụọ ụgwọ obere ego, anyị nwere ike ịtụ anya na a ga-agbazite mgbazinye ego buru ibu. ”Onye ọ bụla nke nwere ike ịtụkwasị obi na obere ihe ka a ga-atụkwasị obi, onye ọ bụla nke na-emeghị ihe n'eziokwu pere mpe, ọ ga-abụkwa onye aghụghọ n'eziokwu ukwuu” (Luk 16:10).
N'otu oge, onye Alakụba pụtara n'ihu ọha mmadụ n'otu ụlọ akwụkwọ Alakụba ma rịọ ka e nye ya Bible ka o ree ha n'ahịa ahụ si agafe. Mgbe onye ọrụ ahụ chere oge, onye Alakụba ahụ kwuru, sị: “Gbalịa nye m naanị Bible abụọ, mgbe ahụ m ga-eweghachi ego maka otu n'ime Bible, m ga-edebe ego ahụ maka ụgwọ nke abụọ ahụ.” N'otu ụbọchị ahụ. onye na-ere n'okporo ámá wetara ego ahụ wee nweta Bible anọ ere. Daysbọchị abụọ ka e mesịrị, ọ wetara ego maka Akwụkwọ Nsọ abụọ wee nata Bible asatọ. O kwesịrị ntụkwasị obi na obere ego, nke mere na enweghị nsogbu ọ bụla ịtụkwasị ya obi mgbe ọ bụla enwere 16 ma ọ bụ Bible 20, nke o rere n'ahịa ebe Onye Kraịst ọ bụla agaghị anwa inye Bible.
Mgbe achoputara ma obu imeputa ihe omumu obula, odi ezigbo nkpa n ’inwe otu ekpere na-akwado ndi otu nzisa ozi oma. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-ekpe ekpere na-arụkwa ọrụ, o yikarịrị ka ha ga-ama ebe na mgbe ohere dị.
Nkwusa ozioma n’etiti ndi Alakụba abụghị naanị ndụmọdụ nke mmụọ kamakwa igbo mkpa anụ ahụ ha. Mgbe otu ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ Bible, ndị jere ozi n'agwaetiti nke Fort Lamy nke dị n'Oké Osimiri Indian, lọghachiri nwere nkụda mmụọ na obi mgbawa na-esochi mwakpo ọgụ na-enweghị isi, nwa agbọghọ Alakụba si n'agwaetiti ahụ pụtara n'ọnụ ụzọ otu n'ime ụmụ akwụkwọ mgbe otu izu gachara. Ọ gwara ya na ya welitere ma gụpụta otu n’ime traktị ahụ ha tụfuru. Maka ọdịmma a, ọ bụ ndị bi n'agwaetiti na-anụ ọkụ n'obi chụpụrụ ya. Nwa akwụkwọ ahụ a na-amụrụ Bible, onye onye achụpụ chụpụrụ onye ụzọ ahụ, jụrụ onye nkụzi ya: “Gịnị ka m ga-eme nwa okorobịa a?” Mgbe ọ nụrụ azịza ya: “You chọtala nwanne,” ọ zara ozugbo, " Ee, nwanne ime mmụọ! ”Mgbe a jụrụ ya ihe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na nwanne ya kụrụ aka n'ọnụ ụzọ ya dị ka onye gbara ọsọ, ọ sịrị,“ M ga-emeghe ụzọ ma gwa ya: 'Ihe ndina m bụ akwa gị na friji m ghere oghe maka gị. '”Mgbe a gwara nwa akwụkwọ ụlọ akwụkwọ Bible na onye Alakụba chụpụrụ abụghị nanị onye ime mmụọ kamakwa ọ bụ ezigbo nwanne ya maka onye ọ ga-elebara anya, o hulatara isi n'ihi na ọ ghọtara ọrụ ahụ n'etiti ndị Alakụba ọ bụghị naanị. pụtara ije ozi nke Okwu ahụ, mana ọ chụrụ nnukwu àjà.
• Ọ dịghị mma ka mmadụ nọrọ naanị ya!
Onye ọ bụla na-alubebeghị dị ka nwa nwoke ma ọ bụ nwanyị mgbe ọ dị afọ 30 na Alakụba n'ụwa na-enyo onye ezinụlọ ya na ndị enyi ya enyo enyo ma ọ bụ adịghị mma. Ọ dị mkpa ka nwoke ọ bụla ma ọ bụ nwanyị ọ bụla chigharịa chọta onye ọlụlụ nke kwere na Kraịst.
Otutu ndi Alakụba na-ele baptism anya dị ka otu n’ime ọtụtụ imirikiti onye Alakụba kwesịrị ime tupu ya ekpee ekpere. Ma mgbe ọ lụrụ nwa agbọghọ nwanyị nke nwanyị bụ Christian nkebi nke dị n'etiti onwe ya na ndị otu ya na nke ndị Alakụba (Umma). Rylụ nwanyị nwanyị bụ onye Kristian pụtara ihe dị omimi karịa ime baptizim.
Ọ bụ ihe nwute na ndị nne na nna, Ndị Kraịst, na-ahapụkarị ikwe ka ụmụ ha ndị nwanyị lụọ onye ha tọghatara. Ha tụrụ egwu ndu Alakụba ya, ka o wee tie nwa ha nwanyị. Ọ bụrụ na ọ kpọọ okpukpe okwukwe nke ugboro abụọ mgbe iwe were ya, o nwere ike ịlaghachi na Islam. Thenmụ ahụ ga-abụ nke ya naanị, nwunye ya ga-eketa naanị otu ụzọ n'ụzọ asatọ nke ihe ha na-eme.
N’aka ozo, umu agbogho ndi Alakụba na-ahọrọ ịlụ Ndị Kraịst si ala ọzọ iji nwee ike ịga obodo ọzọ. Ha wee hapụ ndị kwere ekwe ala nanị ha, na-alụbeghị di. N'ihi ya, e nyere ndị nke ikpeazụ iwu ịlụ ụmụ agbọghọ Alakụba. Mgbe ahụ okwukwe nke onye chigharịrị dị n'ihe ize ndụ, n'ihi na nwunye ya onye Alakụba nwere ike ịrịọ maka ịgba alụkwaghịm n'oge ọ bụla ebe ọ hapụrụ Islam, ebe ụmụ ha na ihe niile ha nwere bụ nke ya.
Amamihe na ntuzi aka nke sitere n’aka Jisos Kraist di nkpa nke mere na ndi kwere ekwe abuo - ma oburu na ha ekweghi, sitere na ndi Islam - chota ibe ha. Naanị mgbe ahụ bụ ezi ndụ ezinaụlọ n’aha Jizọs nwere mmesi obi ike. Nke a nwekwara ike ịbụ ntọala ụlọ ụka ọhụrụ. Naanị ma ọ bụrụ na ha abụọ kwekọrịtara n'iwe ihe nzuzo nke nzukọ nzuzo n'ụlọ ha ka nzukọ ndị ahụ ga-ewere ọnọdụ. Ọ bụrụ na achọpụtara nzukọ dị otú ahụ, a ga-atụba ndị mmekọ abụọ mkpọrọ na ihe niile ha nwere. Marriagelụ di ma ọ bụ nwunye n’aha Jizọs Kraịst nwere nnukwu ihe ọ rụpụtara ma bụrụkwa ụzọ isi hibe ụlọ ụka ọhụrụ.
Mụnna nwoke ndị nwoke na umunna nwanyị ndị nwere ọrụ maka ụka dị adị kwesịrị ịnye kọntaktị n'etiti ụmụ okorobịa Christian na ụmụ agbọghọ nwere ike ịlụ, ka ha wee nwee ike zukọ ma kparịta ụka. Nke a dikwa oke mgbagwoju anya n’ime ala ndi Alakụba ma enweghi nsogbu n’obodo ukwu ọzọ. Whichzọ ebe ụmụ-nwoke na ụmụ-nwanyị na-ebikọ ọnụ na mahadum, ọba akwụkwọ, n'ọdụ ụgbọ elu na n'ogige ntụrụndụ na-egosi nke ọma.
Ihe atụ, nke anya dị ka ihe mgbe ochie nwere ike ịnwa anyị ime nke ọma.
Na Morocco, e nwere otu nwoke nwoke mara mma Kristian nke bụ onye isi ụlọ akwụkwọ. O nweghi ike ịchọta onye ga - adabara ndụ ya. Ọ sịrị, Mụ na Chineke 'bụ nkekọ nke Adam'. Dị ka Onye Okike kwere ka Adam daa n'ụra miri, wee were otu ọgịrịga ya wee kee Iv, nwanyị kachasị mma n'ụwa wee gosi ya ya mgbe nke a gasịrị, agaghị m achọ ya ọzọ. luru nwunye, ma ichere Onye-nwe-anyi inye ndi kachasi nma ha.
Onye-nwe zitere ya nwanyị nwanyị ozi ala ọzọ ochie nke kelere ya wee sị, "Emumewu, oge eruola ịlụ di." Ọ zara, "Daalụ Onye-nwe!" Girlsmụ agbọghọ Ndị Kraịst niile chọrọ ịlụ onye na-eso ụzọ Kraịst. ”-“ Ezigbo, ”Emperor zara. Nwanyị nwanyị gara n'ihu, "Ugbu a ị họrọla otu n'ime ndị a." Emperor zara, "Ma amaghị m ụmụ agbọghọ ndị a." Onye ozi ala ọzọ kwuru, "Nke ahụ adịghị mkpa. Take na-ewere pensụl gị, mechie anya gị, kpee ekpere ma mee ka aka gị sachaa akwụkwọ ahụ. Onye ntuputa pensụl gị tụkwasịrị obi, nke ahụ bụ nwa agbọghọ ahụ Jehova dowooro gị. "Emume kwuru," Ana m anwụ! "Nwaanyị ochie ahụ zara," Echekwala. Ugbu a eruola ịlụ nwunye. ”Emirọ kwara akwa, were pensụl, mee ka aka ya na-ama jijiji daa na mpempe akwụkwọ ahụ, meghee anya ya ma gụọ aha onye ọ họọrọ. “Olee ebe o bi?” Ọ kpụ ọkụ n'ọnụ. "500km si ebe a, na ndịda, n'ụsọ oké osimiri," bụ azịza. Were ub yourọ-ala, ridakuru ya, si ya, Chineke ziterem biakute gi, ka ayi we lua.
Ọkara wụrụ akpata oyi, Emperor weere ụgbọala ya, pụọ, rute ebe o bi, chọta ụlọ ya, daa mgbịrịgba, na - ọrụ ebube - ọ nọ n'ụlọ. Ọ stamra ozi ya na n'ezie - ha lụrụ nwa mgbe obere oge gachara.
Ma mgbe ọnwa ụfọdụ gasịrị, Emperor degaara ndị enyi ya akwụkwọ, kpee ekpere ka m mụta ịhụ nwunye m n'anya, n'ihi na o nwere isi ike, ọ chọghịkwa ihe m chọrọ, mgbe ọ chọrọ ihe, achọghị m nke ahụ. ma obu. Ndụ anyị aghọọla ọnwụ na-aga n'ihu. Dịka onye Kristian, achọghị m ịkụ ya ihe ma ọ bụ gbaa ya alụkwaghịm. Kpee ekpere ka m mụta ịhụ nwunye m nke nwere isi ike. - Taa, ha mụrụ ọtụtụ ụmụ ma bụrụ di na nwunye gọziri agọzi, mgbe ha mecharachara ibe ha ọnụ.
Ọ bụghị mmadụ niile ga-enwe mmasị na usoro nwanyị nke nwanyị ahụ ochie, anyị anaghị akwado ma ọ bụ mezuo ya! Ma ọ jikọrọ ọnụ karịa ndị mmekọ Kristian na ịlụ karịa ọtụtụ ndị ọkà mmụta okpukpe maara ihe. Ọtụtụ ụmụ okorobịa amawo ọfụma wee sị, “Ewoo, ka Onyenwe anyị zitere m mmụọ ozi dị otú ahụ!”
Na mba ndị Alakụba dị ka Morocco, enweghị alụkwaghịm ọhaneze, enwere ike ịme ha n'ihu sheik n'ọfịs ya. Mana n'ọtụtụ oge onyinye pụrụ iche na-enyere ya aka ịbịanye aka n'akwụkwọ dị mkpa na-anọghị n'ememe olili ahụ, ka onye ọ bụla ghara itinye aka ya na kor'an. Ma ụmụ ndị si n'ụdị alụmdi na nwunye ahụ dị ka ndị Alakụba. Na mba dị ka Morocco, ọ nweghị ụzọ iwu iji gbanwee mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke edere na paspọtụ!
Mgbe onye ntụgharị na nwanyị kwere ekwe lụrụ nke a pụtakwara n'ọtụtụ mba Alakụba na agbụrụ abụọ dị n'otu. Okwu, nyocha na mkparịta ụka dị mkpa ruo mgbe a kwụrụ ụgwọ nwanyị ọlụlụ wee nwe afọ ojuju. Mgbe ememme ezinaụlọ nke jikọtara agbụrụ abụọ ahụ, Ndị Kraịst lụrụ di na nwunye na-emekarị ememe nke abụọ na chọọchị dị n'okpuru ala ha, nke ha na-ewere dị ka mmalite dị mma nke alụmdi na nwunye ha.
Ewezuga nsogbu nke ịchọ onye di na nwunye kwesịrị ekwesị, ọ na-enwekarị nsogbu ndị ọzọ na mba Alakụba:
Ndị kwere ekwe lụrụ di ma ọ bụ nwunye enweghị mgbe a ga-anabata n'ọgbakọ maka na ha nwere nwunye anọ na ọtụtụ ụmụ. Na Sudan, parish kpebiri ime ụdị ezinụlọ ndị ahụ baptizim na ịnabata ha, ma ọ bụrụ na isi nke ezinụlọ ahụ kwupụtara n'ihu ọha na o mehiere n'amaghị ma na-agbaso iwu na-ezighi ezi. O nweghị ike ịhapụ nwunye ya na ụmụ ya n'ihi na ọ bụ ya kpatara ha. Ọ ghaghi ikwenye n'eziokwu ahụ, na ọnọdụ ya nke Akwụkwọ Nsọ na-akwadoghị, ọ nweghị ike ịrụ ọrụ ọ bụla dịka okenye nke ụka.
N’India, otu dibịa bekee nwere nwunye anọ na ụmụ 20 ghọrọ Onye Kraịst. O kpebiri ikwusara ndị nwunye ya ozi ọma na idebe nke ahụ nke ga-anabata Oziọma. Ọ gbara ndị nile ọzọ jụrụ Ọkpara Chineke, ma debere ụmụaka niile. Imegwara nwa nwoke nke ọkpara nne ya chụpụrụ bụ ili nna ya mgbe ọ nwụrụ n'ụzọ ndị Alakụba!
Iningbanye na parish, ịchọta ọrụ na iduzi ọlụlụ di na nwunye bụ ụzọ ihe atọ dị mkpa iji jikọta ndị na-eme ntụgharị na chọọchị Ndị Kraịst. Nsogbu nke ejikọtara na usoro ndị a dị mkpa oge ụfọdụ ga-achọkwu ekpere, okwukwe, oge na ike karịa ozisa ozigbo ozigbo Alakụba na nkewapụ na ndị otu ya. Ọtụtụ n’ime ndị ntụgharị zoro okwukwe ha na Jizọs Kraịst site n’ebe ndị ikwu ha bi ma ọ bụ n’otu n’otu, ruo mgbe ha na-akwado onwe ha ma soro onye Kraịst ibe ha biri n’okwukwe ha.
• Mmepe dị mkpa
Mgbe o nwesịrị Kraịst, onye na-eto eto chigharịkwuru Kraịst, adịghịzi aka ịbụ Onye Kraịst tozuru okè. Ọ chọrọ oge iji tolite n'okwukwe, n'ịhụnanya na n'olileanya. O kwesịrị, dị ka anyị onwe anyị kwa kwesịrị, na-agụchi Bible anya ma na-eme mkpebi ya n’ekpere. O kwesịrị ịmụ ịgbaghara ndị ọzọ, dịka Jizọs agbagharala anyị (Matiu 6:14-15). Iwu nke Kraist ka ikpe ghara ikpe ndi madu ikpe mara (Matiu 7:1-5).
Onye chigharịrị na-achọpụta adịghị ike nke Ndị Kraịst ndị ọzọ. Ọ na-ahụ ka ụkọchụkwụ jiri isi ya na-aga n'elu ebe ọ na-ekwu okwu ma na-ekwu okwu site n'okwu ikpe n'ụzọ dị iche n'ụzọ ya si ekwu okwu. Ọ na-ahụ na enwere Ndị Kraịst bara ọgaranya na ndị ogbenye na ụlọ ụka nakwa na a na-akwanyere ndị ọgaranya ùgwù karị, ebe ndị ogbenye na-eleghara anya ma na-ahụghị ya. Ihe ngosi ejiji n'ubochi izua bu ihe doo anya n’onwe ya dika okwu a na-ekwu n’azu ndi mmadu n’abughi ha. Ma mgbe onye ha kwurịtara banyere ya apụta, ha niile na-eme ka ọ̀ bụ ezigbo enyi. Ndị ahụ chigharịkwu kwuru ngwa ngwa. Pasfọdụ ndị ụkọchụ na-eme omume dị ka peacocks ndị na-egosi nku ya. Hụrụ ntakịrị ịhụnanya, nnukwu mpako na enweghị mmasị. N'oge na-adịghị anya ọ ga-ekwu, “Ndị Kraịst adịghị mma karịa ndị Alakụba! E nwere nkewa, inwe nnukwu olile-anya na ịdị nkọ ị ga-ahụ anya gburugburu.”
Ihe onye chigharịrị ga-amụta bụ ihe nzuzo nke mgbaghara mmadụ na ibe ya, ikpee ekpere maka ndị ọzọ, ịnapụ onwe ya ihe, ikwujọ onwe ya n'ihu Chukwu, na ịdị umeala n'obi nke mmụọ. Ihe nzuzo nke Krisendọm bụ ịgbaghara, ọ bụghị izu oke! Anyi kwesiri igbaghara nwanne nwoke na nwanne kariri 490 ugboro.
N’aka nke ọzọ, ndị sị na ha bụ Ndị Kraịst tozuru oke kwesịrị ịmụta ịkatọ ndị tụgharịrị ngwa ngwa. Ọtụtụ ahịrịokwu ndị Alakụba gafere egbugbere ọnụ ha, ọ ka mma ekwughi. Na ndu ha, omume pasha dika omume ndi di aghagh inwu, ochicho nke Kraist dika ijere ndi ozo agha. Ha chọrọ oge iji mụta ịrụsi ọrụ ike ruo awa asatọ kwa ụbọchị, ka ha wee nwee ike ịkpata ihe ezinụlọ ha ga-eri. N’ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ha ekwesịghị ịma ndị mmegide ha ikpe, kama hụ ha n’anya ma na-ekpe ekpere maka ha. Hatekpokọta ndị mmadụ maka steeti agbataobi chọrọ mgbapụta gbara ọkpụrụkpụ. Mgbasa echiche rụrụ arụ na telivishọn, akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ mmado na-akpọ ka ike nke mmụọ nsọ mechie TV ma merie nrọ ndị na-adịghị ọcha na-esite na ya. Ejikwa akọ na uche mezuo ihe Passized in fatalism gabigara oke na uche. Na odudons] gh a onye ncheghar willgh will ahr his Onyenwe ya, ma obu.
Ebee ka mmezi nsogbu ndị a dị? Dị ka ndị Kraịst, anyị chọrọ anya nne mgbe anyị na ndị anyị na-atụgharị tụgharịrị, ọ bụghị anya onye uwe ojii. Nke ikpeazu hụrụ mmejọ ahụ wee dee akụkọ ya. Nne ahụ na-ahụkwa mmejọ nke nwa ya, mana ọ ga-ata ya ahụhụ na ịhụnanya na olile anya maka mmelite ya!
Nne na-agbanwe akwa nwa ya nwa ugboro ugboro n'ụbọchị. Nke ahụ abụghị ọrụ dị ụtọ. Ma nne, na mgbe ụfọdụ nna na-arụ ọrụ a nke ịhụnanya dịka okwu ahụ. Ogologo oge ole? Otu izu? Ọnwa? Ọnwa atọ? Ike wee gwụ ha, ike gwụkwa ha ma tụba ụmụaka ndị na-eto eto n'apịtị? Gaghị ekwe omume, ihe rụrụ arụ! N'ihi gịnị? Bụru iya bụ nna mu bya abụru nna. Ha na-asacha nwa ha ọtụtụ oge, otu afọ, afọ abụọ, karịa karịa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Lovehụnanya miri emi na-amanye ha ime otú ahụ.
Anyị ga-efe onye bụbu onye Alakụba n'ụzọ mmụọ ruo ọtụtụ afọ ka ọ bụrụ nke agbapụtala kpam kpam, doo ya nsọ ma dịrị njikere ije ozi n'aha Jizọs. Ike nke Ọkpara Chineke siri ike karịa ka anyị chere: Onye ọ bụla nke Chineke mụrụ na-emeri ụwa. Nke a bụ mmeri emeri ụwa, ọbụlagodi okwukwe anyị. Isnye bu onye meriri uwa? Nani onye kwere na Jisos bu Okpara Chineke. (1 Jọn 5:4-5)
Ihụnanya nke Jizọs Kraịst na-akpali anyị ịga n’ihu ijere ndị hapụrụ mmụọ na omume nke okpukpe Alakụba aka ma nakwere Kraịst na omume ya. Ihe atụ ahụ na ikwesị ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị Kraịst bụ mkpebi siri ike, dịka pastọ Iskander Jadeed, onye bụbu onye Alakụba dere, sị:
Ọ bụrụ na Ndị Kraịst niile bụ ezigbo Ndị Kraịst,
Onweghi onye Muslim nke ga-abụ onye Alakụba ọzọ.
8.05 -- N N O Y C H A
n'enyemaka iji duzie mkparịta ụka \_\_ Ndị Alakụba banyere Jizọs Kraịst
Kedụ ihe bụ isi ihe atọ ndị ohu nke Onye-nwe ga-emerịrị iji duzie onye Alakụba na Kraịst?
Gini bu nsogbu kachasi nke kewapu Islam na ekeresimesi?
Onye bụ Allah na Islam?
Gini ka Nna nke Jizos Kraist nyere umu aka Ya nke ndi Alakụba na amaghi?
Gini mere na a ghaghi ewere Allah na Islam ka nna anyi nke bi n’elu igwe?
Gini bu amara na Islam putara, ginikwa ka oputara na Iso Kristi?
Gini mere ka onye Alakụba ga-eji rịọ Allah ka ọ gbaghara mmejọ ya mana n'otu oge ahụ enweghị ike ile onwe ya anya dị ka onye mmehie?
Kedụ ihe dị iche n’ebuu ụzọ n’abụ Alakụba na ịbụ onye a họọrọ n’ime Kraịst? Gịnị kpatara ndị Alakụba na-ejikarị “obi mmụọ” n'ụzọ mmetụta uche n'agbanyeghị oke egbu haebe Ndị Kraịst Arab na-arụsi ọrụ ike, dị ọcha ma nwee ndidi?
Gịnị kpatara na enweghi mmụọ nke eziokwu na Islam? N’ọnọdụ dị a doaa ka ihe ndepụta nke Shari’a na-eme ka onye Alakụba gha ụgha na ọbụna mebie iyi?
Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti ịlụ ọtụtụ ndị Alakụba na ịlụ otu nwanyị na Ndị Kraịst?
Kedụ ka esi akụzi ihe n’ụlọ akwụkwọ n’okpuru ndị nkuzi nke Qur’an? Kedu ihe kpatara ụmụaka nọ ebe ahụ ji nweta ihe ọmụma karịa ikike iche echiche na idozi nsogbu?
Gini mere Koran na Shari'a akwusila ohu, ka ndi Alakụba na Western Sudan taa nwee ike inweta ohu? Olee otú mmụọ nke na-achịkwa ụkpụrụ ndị a si emetụta mmekọrịta nke ndị nwe ma ọ bụ nke ugbo nwere n'ebe ndị ọrụ ha nọ?
Gini mere ochichi onye kwuo uche ya ji ga-anọgide na-emegide Alakụba? Kedu ihe kpatara agha dị nsọ nke Islam na ebumnuche iguzobe steeti okpukpe?
Ogologo oge ole ka ọ bụ ka onye Alakụba mezie uche ya, hapụ ọdịnala ndị Alakụba ma ghọọ Onye Kraịst tozuru okè? Gini mere eji ihe onodu ihe omuma gha eme ya bu ihe mmutara na nzukota akwukwo di n'etiti ndi Alakụba?
Gịnị ka ọ pụtara na ọtụtụ ndị Alakụba ka bi n’agbụ nke agbụrụ ha na aghọbeghị ndị mmadụ n'otu n'otu? Kedụ ka eziokwu nke a kwesịrị isi metụta atụmatụ ọrụ anyị?
Ebee ka kor'an kwuru na ndi Alakụba ekwesịghị iwere ndị Juu ma ọ bụ Ndị Kraịst dịka enyi ma ọ bụ ndị mmekọ na azụmaahịa?
Gịnị kpatara ezinaụlọ ndị Alakụba ga - eji kwe ka ndị otu ya gụọ akwụkwọ Ndị Kraịst mana o kweghị ekwe ka ha bụrụ Ndị Kraịst? Ole ndị ka ana-ahọ ịdọ ndị na-achọ aka na ntị ka ha ghara iso Kraịst site n'okwukwe?
ndepụta dị a longaa nke ntaramahụhụ ka ndị nne na nna na-eche echiche ga-eweta iji zọpụta ụmụ ha ma ọ bụ ndị ikwu ha site n'ịhapụ Islam?
Gini mere onye ntughari ji ghara ịhapụ ndi nne na nna ya na ndi ezi nna? Kedu ka ọ ga - esi mee omume ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwupụta n'ihu ọha banyere okwukwe ọhụrụ ya?
Kedụ pasent nke ndị Alakụba na-emesapụ aka ma ole ka ha na-echekarị, na-erube isi na kor'an na Shari'a?
Kedụ ka onye Alakụba ga-esi achọpụta akwụkwọ ndị na-ekwu na ha sitere n'eluigwe sitere na ya nwere ezigbo mkpughe? Kor'an bu akwukwo nke si n'ike mmụọ nsọ Chineke?
Kedu mmehie atọ n’ime Islam enweghị ike ịbụ Gịnị ka ọ pụtara nye onye nchegharị mgbe a kpọrọ ya Kraịst?
Gini mere eji eme ndi mmadu chigharịkwuru ndi Islam na ndi nke Kraist dika ihe edere na onwu ma oburu na kor'an ekwughi ka egbu ya?
Ndi Kpeni nile bu ndi “ndi Alakụba” dika kor'an kwuru? Gịnị bụ ebumnuche nke ọnyà ndị Ala a, oleekwa ihe ọghọm ndị ọ gụnyere?
Kedụ ka ekwesịrị isi mata ihe dị iche iche dị n'akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ndị nke na-esighi n'Akwụkwọ Nsọ? (gụọ Matiu 16:21-23)
Gini mere ihu n’enweghi ezi okwu bu ugha na eziokwu na-nweghi ihu igbu mmadu?
Kedụ ebe mmadụ nwere ike ịchọta ọtụtụ ụka na-adịbeghị njikere ịnabata ndị ntụgharị si Islam gaa n'òtù ha?
Kedụ isi ihe mere ndị isi ụka na ndị okenye ji ala azụ ịnabata ndị tụgharịrị site na Islam n'ime obodo ha? Kedụ ka anyị ga - esi merie ụdị agwa a?
Kedụ ka anyị ga-esi nabata ndị tụgharịrị ntụkwasị obi na ndị anyị na ha nọ, ka ha wee nwee mmetụta nke ụlọ anyị na ịchọta agbụrụ ọhụrụ na “akwu” ha na anyị?
Gini mere o ji bara uru na mba ụfọdụ ndi Alakụba buru ụzọ kpọkọta ndị na - achọ ihe na mkpakọrịta Satọdee tupu akpọbata ha na nzukọ ụka?
Gini mere ndi okenye n ’ulo uka kwesiri iji nye ndi oru ohere inweta oru ha, oleekwa otu ndi gha achoghi ekwesi akwadebe maka oru? Gịnị mere ha ga-eji mụta ịrụsi ọrụ ike ka anyị?
Gini mere na anyi ebughi inye ndi choo onyinye ma obu chigharia onyinye onyinye ego (Baksheesh) ma kari inye ha aka na obere ego?
Kedụ ka anyị kwesịrị isi nyere ndị chegharịrị site na Islam aka ịchọta onye òtù ọlụlụ nke Onye Kraịst? Gini mere ezinaulo ndi Alakụba na-ejikarị n’alụmdi na nwunye nke Onye Kraịst kwere ekwe ka njọ karịa baptizim?
Gịnị kpatara na ọlụlụ Kristian na mba ụfọdụ nke Alakụba, enweghịkwa ike ịkwado iwu nke na ụmụazụ Kraịst na ụmụ ha nọ ebe ahụ ga-abụrịrị ndị Alakụba dịka akwụkwọ njem ha?
Gini ka nzukọ nke ụka ga-ekpebi ma ọ bụrụ na Msulim nke nwere nwunye abụọ, atọ ma ọ bụ anọ arịọ maka baptizim? O kwesịrị ịgba alụkwaghịm ndị nwunye ya ọzọ? Gịnị banyere ụmụ ya ndị si na ndị nwunye dị iche iche?
Gini kpatara na onye nzoputa si Islam ga-eji lu onye kwere ekwe ma obughi onye Alakụba? Kedu ihe puru omume ga-esite na nke ọ bụla?
Gini mere eji eme ka ndi n’achota ndi Ju gha n’abia na omume ndi ndu uka ya na ndi ozo n’ulo uka? Gini bu ihe nzuzo ime mmụọ n’etiti ndi Kristian?
Olee mmebi omume nke ndi chigharire site na Islam nke nwere ike iboja ufodu ndi nkpuchita nke ndi Kraist?
Ogologo oge ole ka a ga-agbaghara onye tọghatara mmehie ya nnukwu njọ ma na-atụle ya ka ọ bụrụ ezigbo Onye Kraịst?
Kedụ ihe nzuzo dị na ya maka ịga nke ọma n’etiti ndị Alakụba? Gini mere ijuso oge ji eri ihe karie ka izisa ozi oma?
A na-ahapụ onye ọ bụla sonyere n'ajụjụ a ka o jiri akwụkwọ ọ bụla mee ihe ya ma jụọ onye ọ bụla kwesịrị ntụkwasị obi mara ya mgbe ọ na-aza ajụjụ ndị a. Anyị na-eche azịza ederede gị gụnyere adreesị zuru ezu gị na akwụkwọ ma ọ bụ na ozi ịntanetị gị. Anyi n’ekpeere gi ekpere n’ebe Jisos siri di, ka O mee ka anyi mata ihe, kpoo, zipu, duzie, nwekwaa ike, chebe ma nonyere gi ubochi ndu gi!
Page last modified on March 23, 2020, at 11:41 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)